Dr. Tint Swe's Writings: April 2015
သာဓုပါလို့ စာထဲမှာတခါမှ မသုံးပါ။ တရားနာရေစက်ချချိန်မှာတော့ ပီပီသသခေါ်ပါတယ်။ သာဓုဆိုတာ ပါဠိစကား ဖြစ်တယ်။ မြန်မာလို (ကောင်းလေစွ) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ သာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတာလုပ်တာ၊ ကောင်းမှုပြုတာကို အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ချီးကျူးရာလည်းရောက်တယ်။ အတွေ့အကြုံလေးတခု ရေးပါရစေ။
အိန္ဒိယမှာနေစဉ်က အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရရုံးကို တာဝန်ယူခဲ့ရတယ်။ ၂ဝဝ၇ မှာ သံဃာတော်တွေက ဆန္ဒပြကြတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒေလီအခြေစိုက်အဖွဲ့တွေကို စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ပြီး လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ပြောရတယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ၉ဝ% က ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က မြန်မာခရစ်ယန်အသင်း (၁ဝ) ခု လောက်ရှိတယ်။ အသင်းတော်တွေကိုလည်း NCGUB ရုံးမှာဖိတ်ပြီး ဆုတောင်းပွဲလုပ်ပေးကြဘို့ရာ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ အသင်းတော်တခုက တာဝန်ရှိသူကပြောတာဟာ ကျွန်တော့်အဖို့ အတော်ထူးဆန်းနေပါတယ်။ (သာဓု) အသံကြားရရင် သူ့အဖို့တော့့့့ စကားလုံးအတိအကျတော့ မမှတ်မိပါ။ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာ၊ မနှစ်သက်တာကို ပြောတာတော့ သေချာတယ်။ သာဓုဆိုတာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဆောင်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူက သိမယ်မထင်ပါ။ ဗုဒ္ခဘာသာရဲ့ အများသုံးဝေါဟာရလို့ပဲ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Well done ဆိုတာလည်း သိမှာမဟုတ်ပါ။ ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာကို မကောင်းဘူးထင်နေတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်သိတဲ့ ဗုဒ္ခအဆုံးအမတွေက ဝေါဟာရကို အဓိကမထားပါ။ သရဏဂုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့ (ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ) ကို ကျွန်တော်တို့ လူမှန်းသိကတည်းက ရွတ်ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ Buddham sarangacchami; Dhammam saranam gacchami; Sangham saranam gacchami လို့ ရေးကြပြီး၊ (သရဏံ) နဲ့ (ဂစ္ဆာမိ) ကို ကျွန်တော်တို့လို အသံမထွက်ကြပါ။
သူတို့မှားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့သာမှန်တယ်လို့ ပြောမရပါ။ ရွတ်ဆိုသူတိုင်း သရဏဂုံတည်ကြပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သရဏဂုံတည်ဖို့ မဟုတ်ပါလား။
နုတ်ကနေ ဝစီကံမြောက်ရွတ်ဆိုတာက ပိုလေးနက်ပါတယ်။ အလားတူ စိတ်ထဲကနေ အလေးအနက်ပြုတာလည်း အကျိုးများတယ်ထင်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြစ်တယ်။
၂။ Screening tests ကြိုတင်ဆန်ခါတင်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပါ။
၄။ အရေပြားကို နေရောင်ကနေကာကွယ်ပါ။
၅။ လူကတက်ကြွမှုရှိနေပါ။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၇။ သွေးဆုံးချိန်မှာ ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသတာမလုပ်ပါနဲ့။
၈။ ဆရာဝန်ကညွှန်ရင် ကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ဥပမာ selective estrogen receptor modulators သောက်ရင် ရင်သားကင်ဆာကို ကာကွယ်ထားနိုင်တယ်လို့ Mayo Clinic ကဆိုပါတယ်။
၉။ Radiation exposures ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်ရှောင်ရှားပါ။ ionizing radiation ခေါ်တဲ့ gamma rays, high-energy UV rays နဲ့ X-rays တွေဖြစ်တယ်။
၁ဝ။ အသီးအရွက်နဲ့ အသီးအနှံကလုပ်တဲ့အစာတွေကို ဦးစားပေးစားသုံးပါ။ အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်ရာကျတယ်။ ပြုပြင်ထားတဲ့အစားတွေ နည်းပါစေ။ အချိုရည်တွေ နည်းသောက်ပါ။
Cancer death rate declines worldwide ကင်ဆာကြောင့်သေနှုန်းကျဆင်းလာ
- တကမ္ဘာလုံးမှာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးရတဲ့နှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ ၃ဝ-၄-၂ဝ၁၅ နေ့ထွက် ဆေးသုတေသန သတင်းက ဆိုပါတယ်။
- ၂ဝဝဝ ကနေ ၂ဝ၁ဝ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်း ၆ဝ က သေဆုံးမှုစာရင်းဇယားတွေကိုလေ့လာခဲ့တာပါ။
- လူဦးရေများလာလို့ ကင်ဆာနဲ့သေကြရတဲ့အတွက်ကတော့ များခဲ့တယ်။ လူတွေကအရင်ကထက် အသက်လည်း ပိုရှည်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
- ကင်ဆာနဲ့သေတဲ့နှုန်းကိုတွက်တော့ ၁% နည်းခဲ့ပါတယ်။
- အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက်လည်း နည်းခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ အဆုပ်ကင်ဆာနဲ့ သေတာလည်း နည်းခဲ့တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကြောင့် သေရတာလည်း နည်းတယ်။
- ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဆေးလိပ်သောက်တာနည်းလာတဲ့အချက်လည်းပါမယ်။ ရောဂါရှာဖွေရေးကို စောစော လုပ်လာနိုင်တာလည်းပါမယ်လို့ နယူးယောက် Mount Sinai ဆေးရုံက ဒေါက်တာ Dana Hashim ကဆိုပါတယ်။
- ဒါပေမယ့် တိုင်ပြည်အားလုံးမှာ အမျိုးသမီးတွေ အဆုပ်ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးရတာက များလာတယ်။ အဲတာက အမျိုးသမီးတွေ ဆေးလိပ်ပိုသောက်ကြလို့ဖြစ်ပါမယ်။
- ရင်သားကင်ဆာနဲ့သေဆုံးတာ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ပိုခဲ့တယ်။
- ကောက်ချက်ချလိုက်ရင် ကင်ဆာတွေကြောင့်သေရတာက ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ နည်းလာပေမယ့် မဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ များလာတယ်။
- အဲလိုနိုင်ငံတွေမှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ စောစာစီးစီးရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်လာနိုင်ရင် ကင်ဆာသေနှုန်းကို လျော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
- အခုလေ့လာမှုကို စာရင်းဇယားစိတ်ချရတဲ့တိုင်းပြည်တွေကသာ ယူထားတာဖြစ်တယ်။ အာဖရိကတိုက်က ၁ နိုင်ငံပဲရတယ်။ တရုပ်နဲ့ အိန္ဒိယမပါဘူး။
Photo = Cancer Cells
(၁) ဆရာရှင့် သမီးမျက်နှာရဲ့ နှာခေါင်းဘေးနားမှာ ဝက်ခြံပုန်းလားတော့မသိဘူး အကျိတ်လို အဖုလေးထွက်လာပါတယ်။ ရဲနေပါတယ်။ အရမ်းလည်းနာပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါလဲရှင့်။ မေးအောက်မှာရော နှာခေါင်းဘေး ပါးနေရာမှာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြား ပေးပါရှင့်။
(၂) ဆရာ ကျနော်ဝက်ခြံတွေအရမ်းထွက်နေလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးစားရမလည်းဆရာ။ ဘာအစားစာ ရှောင်သင့်လည်း ဆရာ။ ဝမ်းလည်းအမြဲချုပ်နေတယ်ဆရာ။
Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့ ဝက်ခြံကိုသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက (ဗက်တီးးရီးယား) တွေရဲ့ အရေအတွက်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေတာ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖြူဥကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တာကိုလဲ နည်းစေနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ဝက်ခြံအရည်ထဲမှာ အဆီကိုလဲ လျော့နည်း စေတာမို့ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့ ဝက်ခြံကိုသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက (ဗက်တီးးရီးယား) တွေရဲ့ အရေအတွက်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေတာ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖြူဥကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တာကိုလဲ နည်းစေနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ဝက်ခြံအရည်ထဲမှာ အဆီကိုလဲ လျော့နည်း စေတာမို့ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ ဘယ် ပဋိဇီဝဆေးမဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ကိုလဲ ထိခိုက်တတ်တယ်။
၁။ Tetracycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ တခါသောက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာလဲဆိုတာ အတိအကျ ပြောမရဘူး။ သက်သာတဲ့အထိလို့ အကြမ်းပြောလို့ ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် လျော့နိုင်တယ်။ ဆေးကို အစာမရှိချိန် သောက်တာ ကောင်းတယ်။ သတိထားဘို့က အသက် ၉ နှစ်အောက် နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဒီဆေးမပေးရဘူး။ အဆင်ပြေတာက ဒီလူမျိုးတွေက ဝက်ခြံဖြစ်တတ်သူတွေ မဟုတ်ကြပါ။
၄။ Doxycycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) နဲ့ (အရစ်သရိုမိုင်စင်) သုံးလို့ မထူးခြားသူတွေကို ဒီဆေး ပေးတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ အစာနဲ့လဲနီးလို့ ရတယ်။ ပျို့ချင်တယ်။ နေရာင်နဲ့ မတည့်ဘူး။
၁။ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေရော ဘယ်လိုအမြန်ဆုံးပျောက်အောင် ကုမလဲဆရာ။ ယိုးဒယား beauty clinic မှာ ဈေးကြီးပေးပြီး scrub သဘောမျိုးပေါ့။ အရေပြားကွာသွားရင် အမာရွတ်ပါ ပါသွားမယ်ဆိုလို့ လုပ်လိုက်တာ ဝက်ခြံညှစ်တံတွေနဲ့ညှစ်တာ အရေပြားကွာပေမဲ့ အမာရွတ်တွေ ပိုကျန်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာ ဝက်ခြံပေါက်ပြီးရင် ချိုင့်တွေမကျန်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆရာ။ ရှိပြီးသားချိုင့်တွေ ပျောက်အောင်ရော ဘာလုပ်ရမလဲ။
၃။ ကျွန်တော်က အသက်၂ဝ ရှိပါပြီ။ မျက်နှာမှာ အခုတလော အကွက်မည်းတွေထွက်နေပါတယ်။ နားလည်သလောက် အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တော့ zits လို့ခေါ်မလား၊ acne scars လို့ခေါ်မလား မသိဘူးခင်ဗျ။ အသားတွေက တဖြည်းဖြည်း အစားခံရသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းအသားထဲစိမ့်ဝင်လာသလို ဖြစ်နေတာပါ။ ဝက်ခြံလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ကြာလာရင် ကျွန်တော့်မျက်နှာကြီး အပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တော့မှာ စိုးလို့ပါ။ ဒါကိုဘယ်လိုများ ကုသရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဆိမ့်ဝင် နဲ့ ဆိုးလို့ပါ ဆိုတဲ့ ကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ အများကြီးမှားနေကြတဲ့ သတ်ပုံကိုတော့ အမာရွတ်ထင်သလို မကျန်ရစ်စေခြင်တာကို အရင်ရေးပါရစေ။ စ လုံးနဲ့သာရေးရပါတယ်။ စိမ့်ဝင် နဲ့ စိုးလို့။
ဝက်ခြံပေါက်ပြီး နီညိုရောင်အမာရွတ်ကျန်ရစ်လေ့ရှိတယ်။ ကြာရင်တော့ ပျောက်သွားပါမယ်။ ဝက်ခြံအမာရွတ်ထဲမှာ ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ (စီဘမ်) တွေအထဲမှာရှိတယ်။ ဒါတွေကိုတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်ကနေ သွေးဖြူဥတွေနဲ့ ရောင်ရမ်း ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ မော်လီကျူးတွေ စုလာတယ်။ အမာရွတ်တိုင်းက မတူကြပါ။ အတွင်းနက်နက် ဖြစ်တာတိုင်းက အမာရွတ် ဆိုးတယ်၊ ပျောက်ဘို့ကြာတယ်၊ တချို့က မပျောက်နိုင်တော့ပါ။
၁။ Icepick scars ရေခဲခွဲစူးနဲ့တူတဲ့အမာရွတ်က အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆွင်းနက်နက်လေးတွေဖြစ်တယ်။
၂။ Boxcar scars ရထားတွဲလိုအမာရွတ်ဆိုတာ အနားသတ်က ဒေါင့်လေးတွေရှိတယ်။ ရေကျောက် ပေါက်ထားသလို မြင်ရမယ်။
၃။ Rolling scars လှိုင်းလေးတွေနဲ့တူတယ်။ ဘေးကိုပါးသွားတယ်။
၄။ Keloid scars (ကီးလွိုက်) အကြည့်ရဆိုးတယ်။ ဖေါင်းမောက်နေတယ်။ အသီးလိုဖြစ်တယ်။ (ရေးထားပါတယ်။)
၁။ Laser resurfacing လေဆာနည်း။ ၂-၃ ရက်ကြာမယ်။
၂။ Fractional laser therapy လေဆာနောက်တနည်း။ ၂-၃ ရက်ကြာမယ်။
၃။ Dermabrasion လည်နေတဲ့ ဝိုင်ယာ ဘရပ်ရှ် သုံးနည်း။ Microdermabrasion ဆိုတာ ယာယီ အပြင်သွားကာနီး သုံးတယ်။ အမာရွတ်ဘေးနားကအရေပြားနေရာက်ဖေါင်းလာစေလို့ အမာရွတ်ကို သိပ်မသိသာစေဘူး။ နဲနဲနာမယ်။ အသေးစားနည်းလဲရှိတယ်။ တိုက်ရိုက်နေရောင် ထိတာရှောင်ထားပါ။
၄။ Chemical peel ဆေးသုံးပြီးအခွံခွါနည်း။ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးအလွှားလေးကို ခွါပေးလို့ အောက်ကနေ အသစ် ဖြစ်လာစေမယ်။ အသစ်က အမာရွတ်မဖြစ်စေဘူး။
၅။ Surgery ခွဲစိတ်နည်း။ နောက်ဆုံးနည်းအနေနဲ့သာသုံးသင့်တယ်။ အမာရွတ် နည်းစေအောင်သာ တတ်နိုင်တယ်။
(ကီးလွိုက်) အမာရွတ်အသီးဖြစ်တာကို Pulsed dye laser လေဆာနည်း သုံးနိုင်တယ်။ (ကီးလွိုက်) မဟုတ်တဲ့ အမျိုးအစားတွေအတွက် သုံးနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ Retinoic acid (ဗီတာမင် အေ) ပါတဲ့ဆေး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ မသုံးသင့်ပါ။ Glycolic acid ဆေးသုံးနိုင်တယ်။ Vitamin C (ဗီတာမင် စီ) ပါတာ သုံးနိုင်တယ်။
Glycolic Foaming Cleanser, Glycolic Acid Toner, Whitening Mask, Drying Cream, Healing & Soothing Mask, Suncare (SPF-30), Temporary Lifting Mask ဆေးတွေရောင်းပါတယ်။ သတိနဲ့သုံးသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာလိမ်း Fancy lotions ကြော်ညာလိမ်းဆေးတိုင်းကို အားမကိုးသင့်ပါ။
ဝက်ခြံကို ခဏခဏညှစ်နေ၊ ဆိပ်ဆွနေတာ မကောင်းပါ။ အမာရွတ်ဆိုတာ အနာပျောက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတာမို့ သူ့ကို ဆိတ်-ဆွ-ညှစ်တာတွေ လုပ်ရင် ဒီဒဏ်အတွက် နောက်ထပ် အမာရွတ်ပျောက်ဖြစ်စဉ် ထပ်တိုးပါလိမ့်မယ်။
သမီးမျက်နှာက သာမန်ဝက်ခြံလေး တစ်ဖုနှစ်ဖုလောက်ပဲပါတယ်ရှင့်။ အခုနောက်ပိုင်း ဝက်ခြံတွေ ပိုပိုထွက်လာပါတယ်ရှင့်။ ဆ်ိုးဝါးတာက သာမန်အဖုလိုမဟုတ်ပဲ အရေပြားအောက်ကနေ မာပြီးနီရဲရောင်နေတာပါပဲ။ ပြီးရင်လည်း တော်ယုံအပြင်ကို မထွက်ပဲ အကြာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ကြတော့ အရမ်းယောင်ပြီး ပြည်ပေါက်ထွက်ပါတယ်။ ဆိုးတာက အဲ့နေရာက မဲမဲကြီးနဲ့ ချိုင့်တွေဖြစ်ကျန်ခဲ့တာပါပဲ။ နောက်ပြီးအဖုတွေက ပါးနှစ်ဘက်မှာ အဲ့လို ပြင်လိုက်နီပြီးမာနေတာတွေ ထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ သမီးအရေပြားကပါးပြီး အဆီပြန်တယ်။ ချွေးပေါက်ကျယ်ပါတယ်။ ဆေးတွေလိမ်းတာလည်း အစုံဖြစ်နေပါပြီ။ မသက်သာပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ အဖုတွေက ပါးနှစ်ဖက်မှာပေါက်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဘာမှမရှိတဲ့မျက်နှာက အခု ၃လအတွင်း လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အမာရွတ်တွေ ချိုင့်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ ဝက်ခြံပေါက်သက်သာမလားဆိုပြီး အိမ်မှာရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းကြည့်တာ ၃ ခါလောက်လုပ်ဖူးပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေ ပိုပြီးကျယ်လာပြီး အဲ့အထဲတွေပါ ဝက်ခြံတွေက လိုက်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အဲ့ဆေးတွေပေးပါတယ်။ မသက်ပါဘူးဆရာ။ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ အသက်က ၂၈ ပါဆရာ။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ အခုလိုဖြစ်တာ ၃ လ အတွင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာ။ ရာသီကတော့ တစ်လတစ်ခါပုံမှန်လာပါတယ်။
ချွေးထွက်အိတ်တွေကနေ (စီဘမ်) ဆိုတာ ထုတ်ပေးနေလို့ အသားအရေ စိုစွပ်နေစေတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ရောက်ရင် (အင်ဒရိုဂျင်) ဟော်မုန်းတန်ခိုးနဲ့ ပိုထွက်တယ်။ အသက် ၂ဝ ကျော်မှ ပြန်ကျတယ်။ ချွေးနဲ့အတူ (ဆဲလ်) အပျက်အစီးတွေပါ ရောထွက်လာတယ်။ ဒီတော့ အိတ်မှာပြည့်နေမယ်။ ဘေးကအရေပြားကို ပြန့်နှံ့လာစေတယ်။ မျက်နှာအဆီပြန်တယ် ပြောကြတာပေါ့။ ဒီအတိုင်းသာဖြစ်နေရင် ဘာမှပြဿနာမပေါ်ဘူး။
အရေပြား (ဆဲလ်) တွေက ပိုကပ်စေးမှု ဖြစ်လာတာ၊ အိတ်ထိပ်ပိုင်းမှာ ပိုများလာတာ၊ ချွေးထွက်များလာတာဆိုရင် ဒုက္ခ စပေးတော့မယ်။ P. acnes ဆိုတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေ များပြားလာမယ်။ ရောဂါအဆင့်တော့ မရောက်သေးဘူး။ ဒီအဆင့် ဆိုရင် Benzoyl peroxide ဆေးနဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နိုင်တယ်။ Salicylic acid 2% လိမ်းဆေးက စေးကပ်မှုကို တားပေးမယ်။
တကယ်လို့ ထွက်ပေါက်ကျဉ်းပြီး ပိတ်လာရင် Whitehead (Closed Comedone) ဝက်ခြံခေါင်းဖြူဆိုတာ ဖြစ်လာမယ်။ အပေါက်ပွင့်နေသေးရင် Blackhead (Open Comedone) ဝက်ခြံခေါင်းမဲခေါ်တယ်။ ပိုးကိုသေအောင် ပဋိဇီဝစားဆေး၊ လိမ်းဆေး သုံးရမယ်။ Tetracycline, Erythromycin, Minocycline, Doxycycline, Clindamycin ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ စာသပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။
ဝက်ခြံကို အဆင့်ဆင့်ခေါ်သေးတယ်။ Acne Pimple ဆိုတာ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဘေးကအရေပြားကို ရောဂါရလာတဲ့ အဆင့်၊ Red bump နီပြီးဖေါင်းလာမယ်။ ပဋိဇီဝဆေးကို သေခြာပေါက်ပေးရမယ်။ Acne Pustule ဆိုတာ ပြည်တည် လာတာကို ခေါ်တယ်။ Acne Cyst ဆိုတာကတော့ အိတ်တခုလို ပိုကြီးလာတာပါ။
ကုရတာက လာမယ်ကြာမယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံစဖြစ်တာ အရွယ်ရောက်ချိန်ကြမှမို့ အရွယ်ရလာရင် ပျောက်မှာ သေခြာတယ်။ အရွယ်ဆိုတာလဲ ဟော်မုန်းနဲ့ သိပ်ဆိုင်တယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဟော်မုန်းက အသက်နဲ့တင်မကဘူး၊ လိင်စိတ်ပြောင်းတာ၊ ကျား-မ ဆက်ဆံတာ၊ အိမ်ထောင်ကျတာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတာစတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကို လိုက်တယ်။ ဝက်ခြံရှိနေသူဟာ နုပျိုသစ်လွင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ပြရုပ်အစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံရောင်စုံတွေအတွက် အရေပြားကို ဂရုစိုက်ဘို့လိုပါတယ်။ ဂရုစိုက်ယုံနဲ့ပျောက်မယ် ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အစားအစာကြောင့်ဖြစ်တာ မဟုတ်လို့ အစားကိုထည့်ပြောတာ နည်းလမ်းမကျပါ။ အဆီတွေ၊ (ဆဲလ်) အသေတွေ ရှင်းအောင်လို့ သိပ်မပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ ဆီနဲ့လုပ်တဲ့မိတ်ကပ် မသုံးပါနဲ့။
(၁) ရေ ဖန်ခွက် ၃-၄ ခွက်ကို ကျိုပြီး Soda bicarbonate ဆိုဒါမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို အဲဒီအထဲစိမ်ပြီး မျက်နှာပေါ် ၅-၆ ခါ အုပ်ပါ။ နောက် ဆန်မှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ Curd ဒိန် ၁ ဇွန်းကို ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။ နောက်ဆုံး ရေအေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပါ။
(၂) အလှဆီ-ဆပ်ပြာ Glycerin soap နဲ့ ဆားနဲနဲရောပြီး သုတ်လိမ်းပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
(၃) နံနံပင် အရွက်ကို အရည်လုပ်၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ နံနွင်းမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက် ရောပါ။ ညအိပ်ရာဝင်မှာ လိမ်းပေးပါ။ မနက်လင်းရင် မျက်နှာသစ်ပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
(၄) သံပရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ သစ်ကြံပိုးအမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းရောပါ။ ညအိပ်ရာဝင်မှာ လိမ်းပေးပါ။ မနက်လင်းရင် မျက်နှာသစ်ပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
• ရေနွေး ဖန်ခွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံထဲကို ဆားခါး Epsom salt (Magnesium sulfate) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နဲ့ Iodine အိုင်အိုဒင်း ၄ စက် ရောထည့်ပါ။ အေးလာတဲ့အခါ ဂွမ်းစလေးနဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွေ့ချိန်မှာ အဝတ်သန့်သန့်နဲ့ ရှင်းပြစ်ပါ။
• သံပရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နဲ့ ကျိုတားတဲ့ နွားနို့ တဖန်ခွက်ထဲရောပြီး လိမ်းပါ။
• နံသာနီ Red sandalwood5gm နဲ့ Cinnamon powder နနွင်းမှုံ့5gm ရောပါ။ နွားနို့နဲနဲပါ ထည့်ပါ။
• Almond powder ဗာဒံစေ့ အမှုံ့ကို ရေနဲ့ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။
• ဆား၊ ပျားရည် နဲ့ သံပရာရည်ဆတူရော လိမ်းပါ။ Yogurt ဒိန်ချဉ်လဲ ထည့်နိုင်တယ်။
• Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne.html
• Acne Antibiotics ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-antibiotics.html
• Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/acne-scars.html
• Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-vulgaris.html
• Acne Laser treatment ဝက်ခြံကို လေဆာ နဲ့ ကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-laser-treatment.html
• Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/seborrheic-keratosis-or-keratosis_22.html
• Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/thigh-acne.html
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ကနေ့တင်လိုက်တဲ့ (ပို့စ်) ၂ ခုမှာ မှတ်ချက်ရေးသူတချို့က ကျွန်တော်ပေးချင်ချင်တဲ့ (မက်ဆေ့ခ်ျ) ကို မငုံမိကြပါ။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားနဲ့ ပုဂံ။ မြို့ပတ်ရထားပုံအောက်မှာ အဲလိုဟာတွေထက် ကောင်းတာတွေရှိနေပြီလို့ ရေးတာတွေ့တယ်။ ပုဂံကိုကြတော့ ရှုခင်းကောင်းတာ၊ လှတာ၊ လွမ်းစရာကိုရေးတယ်။ နှစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက အဲတာတွေမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲက တကယ့်အရှိကို သူများတွေကကြည့်သွားတာကို ပြချင်တယ်။
အရှိဆိုတာ အဟောင်းလည်းအရှိပဲ အသစ်လည်းအရှိပဲ။ ရှိခဲ့တာနဲ့ ရှိနေတာ။ သူများတွေက အပေါ်ယံလေးကြည့်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က သမိုင်းအထိကြည့်ရပါမယ်။ နေပြည်တော်က ဆယ်လမ်းသွားလမ်းမကြီးတွေပေါ်က အက်စ်ယူဗွီနဲ့ လူတွေသာ မြန်မာပြည်သားမဟုတ်ပါ၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပေါ်က ခေါင်းရွက်သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသူပါလို့ ပြောချင်တာ။
ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတဲ့ဘုရင်သာ တို့ဘုရင်လို့ ထင်မနေကြပါနဲ့ နရသီဟပတေ့လည်း ရာဇဝင်ထဲကဘုရင်ပါပဲလို့ ပြောချင်တာ။ နရသီဟပတေ့ဟာ လေးမည်ရမင်းဖြစ်ပါတယ်။ နရသီဟပတေ့၊ တရုတ်ပြေးမင်း၊ မင်းခွေးချေး၊ သားမြွှာဘ။ သူဟာ ၁၂၅၄ ကနေ ၁၂၈၇ အထိ ၃၃ နှစ်ကြာနန်းစံခဲတဲ့မင်းလည်းဖြစ်တယ်။ နန်းသက်ရှည်တိုင်းလည်း မင်းကောင်းမဟုတ်တာကိုပါ သိကြပါလားခင်ဗျာ။ မင်းဆိုးတွေနန်းသက်ရှည်ရင် တိုင်ပြည်ပျက်တတ်တာလည်း သိပါခင်ဗျား။
- ယောက်ျားတွေလည်း အသက်ရှည်လာကြလို့ မိန်းမတွေနဲ့သိပ်မကွာကြတော့ဘူးလို့ ၃ဝ-၄-၂ဝ၁၅ နေ့ ဆေးသုတေသန သတင်းတခုက ဆိုပါတယ်။
- ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင် ဗြိတိန်မှာ ၂ဝ၃ဝ ရောက်ရင် ယောက်ျားတွေအသက်ဟာ ပျမ်းမျှ ၈၅့၇ နှစ်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိန်းမတွေအသက်ရှည်တာထက် နှစ်နည်းနည်းသာလိုပါတယ်။
- ၁၉၈၁ တုံးက ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေထက် ပျမ်းမျှ ၆ နှစ်အသက်တိုကြပါတယ်။
- မိန်းမတွေရော ယောက်ျားတွေပါ အရင်ကထက် အသက်ပိုရှည်ရှည်နေလာနိုင်ကြပါပြီ။
- လန်ဒန်က Imperial College အင်ပီရီရယ်ကောလိပ်က ဆရာဝန်တွေကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
- (ONS) အမျိုးသား စာရင်းအင်းဌာနက ခန့်မှန်းထားတာထက် အမျိုးသားတွေက ၂့၎ နှစ်ပိုရှည်မယ်၊ အမျိုးသမီးတွေက ၁ နှစ်ပိုပါမယ်။
- အသက်ရှည်ပြီး လူကနေသာထိုင်သာရှိဘို့လည်း အရင်ကထက်ပိုကောင်းလာတယ်။
- (အသက်ရှည်ခြင်း + နေသာထိုင်သာရှိမှု + စိတ်ချမ်းသာမှု) အင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံမှသာ နေပျော်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
- သန္ဓေသားရဲ့မျိုးဗီဇ DNA ကို ပြုပြင်ခြင်းသုတေသနကို ယူအက်စ်က ငွေပေးမှာမဟုတ်လို့ ၃ဝ-၄-၂ဝ၁၅ နေ့စွဲနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ဆေးပညာသတင်းက ဆိုပါတယ်။
- ဒီလိုလုပ်ြခင်းဟာ မဖြတ်ရလို့ တားတဲ့မျဉ်းကို ဖြတ်ရာကြမယ်လို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဒါရိုက်တာ Dr Francis Collins ဒေါက်တာ (ဖရန့်စစ် ကိုလင်းစ်) က ဆိုပါတယ်။
- နည်းနာကို Crispr technology နည်းပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ DNA ကို လိုသလိုမွမ်းမံတဲ့နည်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
- ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တရုပ်ပြည် Sun Yat-sen ဆွန်ယက်ဆင် တက္ကသိုလ်မှာ ဒီနည်းကိုသုံးပြီး ဘီတာ သာလာဆီးမီးယား သွေးကင်ဆာရောဂါပါ DNA ကိုပြုပြင်ပေးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၈၆ ကြိမ်လုပ်တာမှာ ၇ ကြိမ်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပစ်မှတ်လွဲတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်တဲ့ သန္ဓေသားတွေက မရှင်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
- ကြီးမားပြီး အရေအတွက်မှန်းမရနိုင်လောက်တဲ့ လုံခြုံရေးစဉ်းစာချက်အရလို့ အမေရိကန် သုတေသနပညာရှင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
- (ကလုန်း) ဆေးပညာရှင် Dr Tony Perry ဒေါက်တာ (တိုနီ ပါရီ) ဒီဇိုင်းဖေါ်ထားတဲ့ကလေးတွေဆိုတာ HG Wells (အိတ်ခ်ျဂျီဝဲလ်) ပိုက်နက်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ (အိတ်ခ်ျဂျီဝဲလ်) ဆိုတာ ဗြိတိသျှ ဆေးသိပ္ပံ စာရေးဆရာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
- Hsann Oo အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း (ခွဲ)၊ ကောင်းဆင့်ကျေးရွာ၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်
- Phyo Wai ပုလဲ အထက၊ ဗိုလ်သာကြည်ဆောင်လေးကတော့ အတော်လေးဟောင်းနေပြီ
- Sein Win ဟောဒီကျောင်းလေး ကြံ့ခိုင်ရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်း
ကျွန်တော်က ဟောင်းနွမ်းယိုင်နဲ့နေတဲ့ပုံမျိုး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ပုံမျိုး တင်မိရင် တချို့က အဲလောက်မဆိုးပါဘူး၊ သူများတိုင်းပြည်တွေနဲ့တော့ မယှဉ်ပါနဲ့၊ တိုးတက်လာပါပြီနဲ့ ရေးလာကြတယ်။
အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းဘုရားတို့ကိုပဲ မြန်မာဘုရင်တွေလို့ထင်နေကြတယ်။ တရုပ်ပြေးမင်း၊ အနောက်ဖက်လွန်မင်းနဲ့ ကုလားကျမင်းတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံကဘုရင်တွေပါပဲ။
Burma: An Enchanted Spirit ဗမာပြည် (သို့) သီဆိုမြည်တမ်းနေတဲ့ ဝိဉာဉ်တွေ
ဓါတ်ပုံစာအုပ်ထုတ်သူဟာ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ အနုပညာသမားဖြစ်တယ်လို့ မိတ်ဆက်ထားတယ်။ David Heath (ဒေးဗစ် ဟဲ့သ်) လက်ရာပါ။ (ဟဲ့သ်) ဆိုတာနဲ့ စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ရာကနေတွေ့မိတာပါ။ ခင်ဗျားတို့မှာလည်း ဓါတ်ပုံ ကောင်းကောင်းတွေ ရှိမှာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ပုံတွေက ပိုပြီးတောက်ပ၊ လှပကြတယ်လို့ ကြော်ငြာထားတယ်။
အမှာစာရေးသူတဦးက ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံက အမာရွတ်တွေကိုပြချင်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်သားတွေရဲ့ တိုက်ပွဲ ဒဏ်ရာတွေကို ငေးကြည့်မယ့်အစား သူတို့ကို သယ်ဆောင်ကြရသူတွေ ပြုံးရယ်နေတာကို ပြချင်တာပါလို့ဆိုတယ်။ မြန်မာ (သို့) ဗားမားဟာ အဲလိုတိုင်းပြည်တွေထဲကတခုပါ။ နာမည်ကိုက အမာရွတ်ပါ။ အဲဒီနေရာဒေသမှာ အလွှာပေါင်းစုံ ရောယှက်နေတာပါတဲ့။
စာအုပ်ကို (နစ် မိုင်လိမ်းစ်) က မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အပြုံးတွေကသာ အရာရောက်တယ်။ သူ့ခေါင်းစဉ်တွေက ခေါင်းစီးတွေထက်တာသွားတယ်။
ကျွန်တော် ဒီပုံကိုတင်တော့ ကွန်မင့်တွေ အမျိုးမျိုးပေးကြတယ်။ သူများတွေနဲ့တော့ ယှဉ်မရပေမယ့် တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒီပုံကဟောင်းနေပါပြီ၊ အခုဒိထက်ကောင်းလာပြီ စသဖြင့်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ဘတ်စ်ကားတိုးစီးနေတဲ့ပုံကို သုံးမိတော့ တယောက်က အဲလိုညံ့တာတွေ အခုမရှိတော့ပါဘူးလို့ ရေးလာတယ်။ နောက်မှာ ကျွန်တော်ကျမတို့ဆီမှာ အဲတာမျိုးတွေ အခုထိရှိပါတယ်လို့ ဝိုင်းထောက်ခံကြလို့ သက်သာသွားတယ်။
ကျွန်တော်က အရှိကိုသာ သိချင်ရေးချင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေက ဟောင်းချင်ဟောင်းမှာပေါ့။ အဖြစ်အပျက်တွေက ဟောင်းချင်ဟောင်းမှာပေါ့။ ပုဂံကပုံတွေချည်းပြပြီး အနော်ရထာသာမဟုတ်ပါ၊ တရုပ်ပြေးမင်းနရသီဟပတေ့လည်း ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ဘုရင်ပဲမဟုတ်ပါလား။
ဆရာ ဆရာပြောတဲ့ fertomid က ဒီမှာနဲနဲဝယ်ရခက်တယ်ဆရာ။ တခြားဆေးလေးများရှိရင် replace လုပ်လို့ ရမလားဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။
ရွဲ့ပြီးဖြေတယ်တော့ မထင်နဲ့နော်။ မျိုးဥထွက်ဆေး နာမည်အမျိုးပေါင်း (၈ဝ) ပို့လိုက်ပါတယ်။
1. C -Hop 50
2. Cee Cee
5. Clofert (100 mg)
6. Clofert (50 mg)
7. Clomate -50
9. Clome (100 mg)
10. Clome (50 mg)
11. Clomidac Tab
12. Clominova -25
14. Clomiriv - 25
16. Clomitrop (50 mg)
19. Clopreg (50 mg)
25. Fertisafe (25 mg)
28. Fertomid (100 mg)
29. Fertomid (50 mg)
31. Ferton (25 mg)
33. Fertotab (50 mg)
35. Fertyl -M
36. Fertyl Super
38. Fetrop (100 mg)
40. Fission (50 mg)
42. Folistim (100 mg)
44. Fulfyl (25 mg)
46. Fulfyn (50 mg)
48. Infotyl (100 mg)
49. Infotyl (50 mg)
51. Mephy (100 mg)
53. Ovafert 50
55. Ovagen (100 mg)
56. Ovagen (50 mg)
58. Ovipreg (50 mg)
60. Ovitec 100
61. Ovitec 50
65. Ovuclom (100 mg)
66. Ovuclom (50 mg)
68. Pifert (50 mg)
70. Pregmate (25 mg)
71. Pregmate -M
74. Rejun (100 mg)
75. Rejun (50 mg)
77. Siphene (100 mg)
78. Siphene M
80. Tevrol M
- ကဆုန်လဆန်း (၁၂) ရက် ညဦးပိုင်း ၈ နာရီ ၄၂ မိနစ်အချိန်မှာ နေရောင်မပျောက်သေးပါ။
- ကောင်းကင်ပြာမှာ ပေါ်နေတဲ့ (လ) ကို အိမ်ခန်းဘေးက ပန်းပင်နဲ့အတူ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
- ပန်းပင်နာမည် မသိပါ။ အဆုပ်လိုက်အဖြူရောင်ပန်းတွေက ပွင့်ကာစမှာ မြန်မာပြည်က ကရမက်ပန်းကို လွမ်းနေစေပါတယ်။
- ခေါင်မိုးအစွန်းလေးပေါ်နေတဲ့ အိမ်အောက်ဆုံးထပ်မှာ ကျွန်တော်နေပါတယ်။
• ဆရာရှင့် သမီးအသက်က ၂၃ ပါ ကလေးမွေထားတာ ၃ လရှိပါပြီ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ပါသည်။ သမီးရင်သားမှာ အကျိတ်အဖု စမ်းမိတာ ၁၅ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ မျိုးရိုးထဲမှာ ကင်ဆာဖြစ်ဖူးသူလည်း မရှိပါဘူးရှင့်။ သမီးအကျိတ်က ကင်ဆာကျိတ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။
• ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာဖြစ်တာဆိုရင် နို့လမ်းပိတ်နေလို့ အခဲဖြစ်တာလား စစ်ရမယ်။ အကျိတ်သပ်သပ်မရှိပဲ ခဲနေမယ်။ နာမယ်။ နို့နာဖြစ်ဘို့ဦးတည်နေမယ်။ ကင်ဆာက အကျိတ်သပ်သပ်စမ်းလို့ရမယ်။ မနာပါ။ နို့တိုက်ပေးပါ။ လိုရင်ညှစ်ပေးပါ။ အပူကပ်ပေးပါ။ လိုသေးရင်မေးပါ။
• ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာက ယခုမြန်မာပြည်ထဲရှိပါသလားရှင်။ သမီး ဆရာနဲ့ပြချင်လို့ပါ။ နို့ထွက်အား အရမ်းကောင်းတယ်ဆရာ။ ခဲနေတဲ့နေရာရှိတာ နို့တိုက်လို့ လျော့သွားရင် မစမ်းမိတော့ဘူး။ အဲဒီအကျိတ်ကတော့ ညာဘက်ရင်သားအပေါ်ဘက်မှာ ရှိနေတာပါရှင့်။ ကင်ဆာကျိတ်ဖြစ်နိုင်ချေများလားဆရာ။ သမီးရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ဆိုရင်။
• ဖြေတာထဲမှာ ပါတာကိုသာ ဖြစ်စေပါမယ်။ မဖြစ်လောက်ပါ။ ဆရာက တခြားတိုင်းပြည်မှာသာ နေရပါတယ်။
• ဆရာ ရန်ကုန်ထဲမှာဆို ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးသင့်ပါသလဲ သမီးက အနာတခြား ဆေးတစ်ခြားဖြစ်မှာလည်း ကြောက်မိတယ်။ ဆရာလမ်းညွှန်ပေးပါရှင့်။
• ဆရာက မြန်မာပြည်ထဲက ဆရာဝန်-ဆေးရုံ-ဆေးခန်း-ဆေးဆိုင်တွေကို မသိပါ။ ဆောရီး။
၂၈-၄-၂ဝ၁၅ နေ့ထုတ် San Francisco Chronicle သတင်းစာမှာ ဆေးပညာဆောင်းပါးတပုဒ်ပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်နည်းတယ်။ ကာလီဖိုးနီးယားမှာနေကြတဲ့ ကလေးအမေတွေကို လေ့လာမှုအသစ်လုပ်ပြီး အဲလို ရေးလိုက်တာပါ။
ရင်သားကင်ဆာလို့ ရောဂါနာမယ်တပ်ထားသူ အမျိုးသမီး ၁၆ဝဝ ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို လေ့လာပါတယ်။ ကလေးကို နို့တိုက်ခဲ့သူတွေမှာ ၃၇% ပြန်ဖြစ်တဲ့နှုန်းနည်းတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးကို အနည်းဆုံး ၆ လ နို့တိုက်ခဲ့သူတွေမှာ ဆေးကုသရာမှာလည်း ရလဒ်ပိုကောင်းကြတယ်။ သေဆုံးမှုမှာလည်း ၂၈% နည်းတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ကောက်ချက်က (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်းနည်းစေလို့ဖြစ်တယ်။
၈ဝ% မှာ ရင်သားကင်ဆာမျိုးခွဲ luminal A ဖြစ်ကြတယ်။ သက်သာမှုပိုရနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်းပေးလို့ရတဲ့အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ တခြားကင်ဆာမျိုးခွဲတွေနဲ့တော့ ကလေးနို့တိုက်လို့ ပိုကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်ဆိုတာ မတွေ့ပါ။
အမေရိကားမှာ ကလေးအမေ ၇၇% ကနို့တိုက်ကြတယ်။ ၁၉၇ဝ ကျော်နဲ့စာရင် နည်းလာနေတယ်။
ကိုယ်ဝန်မရစေတဲ့ အကြောင်းတွေမှာ ၃ ပုံ ၁ ပုံက အမျိုးသား၊ နောက် ၃ ပုံ ၁ ပုံကအမျိုးသမီးနဲ့ ကျန် ၃ ပုံ ၁ ပုံက နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ ဆိုင်တာတွေ့ရတယ်။ ဒီဆန်းစစ်မှုက မတူတာတွေလဲရှိပါတယ်။ ကလေးမရဖြစ်နေကြရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရပ် ၃ ခုရှိတယ်။ ၈ဝ% စုံတွဲတွေမှာ တွေ့ရရမှာက -
၁။ အမျိုးသမီးကလစဉ် မျိုးဥထွက်တာ၊
၂။ အမျိုးသားသုက်ပိုး ပြဿနာနဲ့
၃။ အမျိုးသမီးသားအိမ်ပြွန် ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။
သန္ဓေရခြင်းရဲ့အခြေခံဟာ မမျိုးဥနဲ့ ကျားသုက်ပိုးတွေ့ကြဘို့ ဖြစ်တယ်။ ကလေးမရနိုင်သေးသူတွေ အလွယ်ဆုံး စလုပ်နိုင်တာက မျိုးထွက်-မထွက်သိဘို့ဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင်စမ်းနိုင်တယ်။ မျိုးဥထွက်စေတဲ့ဆေးကိုလဲ ဝယ်သောက်နိုင်သေးတယ်။ မျိုးဥဆိုတာရာသီလတလရဲ့ အလည်ရက်မှာတလမှာတခါ၊ တခါမှာတဥသာထွက်တယ်။ ၂၈ ရက်တခါ ရာသီလာသူက ၁၄ ရက်၊ ၃ဝ ရက်တခါဆိုရင် ၁၅ ရက်မှာထွက်လိမ့်မယ်။ မျိုးဥထွက်မဲ့ ရက်ရဲ့ရှေ့ ၄-၆ ရက်မှာ အတူနေတာက ကိုယ်ဝန်ရဘို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးရက်တွေ ဖြစ်တယ်။ (စာသပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။)
သုတေသနအရတိတိကျကျ ပြောရရင် -
• ၃ဝ% သောအမျိုးသမီးတွေကအဲဒီလလယ်ရက် အတိအကျမှာမျိုးဥထွက်တယ်။
• ၆ဝ% က လလယ်ရက်ထက် ၁ ရက်စောထွက်တယ်။
• အားလုံးကို ခြုံလိုက်ရင် ၇၈%က လလယ်ရက်ထက် ၂ ရက်စောထွက်တယ်။
• ၈ ရက်မြောက်နေ့ကနေ ၁၉ ရက်အတွင်းဟာကိုယ်ဝန် အရနိုင်ဆုံးရက်တွေ ဖြစ်တယ်။
• ၈ ရက်မြောက်ကနေ ၁၉ ရက်မြောက်အတွင်း မအတူနေသူတွေထဲက ၄့၇% ကိုယ်ဝန်ရကြတယ်။
• ၈ ရက်မြောက်ကနေ ၁၉ ရက်မြောက်အတွင်း အတူနေသူတွေထဲက (ကွန်ဒွမ်) နည်း၊ သုက်ရည်ကို အပြင်ထုတ်နည်း သုံးသူတွေမှာ ၅့၆% ကိုယ်ဝန် ရကြတယ်။
• ၈ ရက်မြောက်ကနေ ၁၉ ရက်မြောက်အတွင်းဘာအကာအကွယ်မှ မသုံးသူတွေထဲက ၁၁့၉% ကိုယ်ဝန် ရကြတယ်။
• မျိုးဥထွက်ရက်အတိမှာအတူနေသူတွေ ၈-၁ဝ% ကိုယ်ဝန်ရကြတယ်။
• မျိုးဥမထွက်ခင် ၅ ရက် အလိုမှာအတူနေသူတွေ ၄% ကိုယ်ဝန်ရကြတယ်။
• မျိုးဥမထွက်ခင် ၄ ရက်အလိုမှာအတူနေသူတွေ ၁၅% ကိုယ်ဝန်ရကြတယ်။
• မျိုးဥမထွက်ခင် ၂ ရက်အလိုမှာအတူနေသူတွေ ၂၅-၂၈% ကိုယ်ဝန်ရကြတယ်။
တားဆေး-တားနည်း၊ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးပါနဲ့။ စိတ်မလောပါနဲ့၊ စိတ်မစောပါနဲ့၊ အချိန်ယူပါ။ လိင်စိတ်တိုးဆေးတွေ၊ လိင်စိတ်အားပေးအစာတွေကို အားမကိုးပါနဲ့။ လိင်စိတ်များတာ၊ သန်တာနဲ့တော့ ကလေးမရပါ။ ကလေးရအောင် ရက်ရွေးပြီးသာ အတူတာလည်း အားမကိုးပါနဲ့ ပုံမှန် လင်-မယားတွေလိုသာ ပြုမူ-ဆက်ဆံပါ။ မရရအောင် ခဏခဏ ဆက်ဆံမယ်လို့လည်း စိတ်မကူးပါနဲ့။ စိတ်တင်းအားတွေ လျှော့ချလိုက်ပါ။ တာဝန်အရလုပ်ရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ ချောမွေ့အရည်-ဆီသုံးစရာလိုရင် သုက်ပိုးသတ်ဆေးမပါတာ သတိထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နှစ်ယောက်လုံးကျေနပ်အားရမှု ဖြစ်စေအောင် ကြိုးစားပါ။ မိန်းမအထက်ကနေနည်းလည်းရပါတယ်။ နေ့တိုင်းနေသင့်တယ် ဆိုတာမဟုတ်ပါ။ ဒီရက်ကိုမှ မဆက်ဆံမိရင် မရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း မမှန်ပါ။
ဆက်ဆံပြီးချိန် သုက်ရည်အပြင်ထွက်တိုင်း ကလေးမရစေတဲ့ အကြောင်းမှန်လို့ အသေအခြာမပြောနိုင်ပါ။ (ဗဂျိုင်းနား) အဝကနေထွက်တာတိုင်းလည်း သုက်ရည် ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ အမျိုးသမီးကထွက်တဲ့ အရည်လဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ဆက်ဆံပြီးချိန် ထွက်တဲ့အရည်မှာ ၅% သာသုက်ရည်ဖြစ်ပြီး၊ ၉၅% က တခြားအရည် ဖြစ်တယ်။ ပိုတဲ့ ပုံမှန်သုက်ရည် လျှံထွက်တာလဲရှိနိုင်တယ်။ သုက်ရည်အပြင်ထွက်တဲ့စာ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
သားအိမ်အနေအထား AV များတယ်။ RV ဖြစ်နေတာနဲ့ ကလေးမရစေတာ မဟုတ်ပါ။ နှစ်မျိုးလုံးကနေကိုယ်ဝန် ရစေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ RV နောက်ပြန်ဖြစ်နေသူတွေမှာ နည်းနိုင်တယ်လို့တော့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးမရစေဘူး ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့် ဆေးခန်းလေး RV နဲ့လာမွေးသူတွေ မနည်းရှိပါတယ်။ AV ထဲကလည်း ကလေးမရနိုင်သေးသူတွေ တပုံတပင်ရှိတယ်။
အမျိုးသမီးဟာ ပက်လက်အနေအထားနေချိန်မယ် သုက်ရည်ကိုဗဂျိုင်းနားအဝနေရာမှာသာ စွန့်ထုတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အောက်ဖက်ဆီကို ဆင်းဝင်စေနိုင်တယ်။ RV ဖြစ်နေသူပက်လက်အနေအထားမှာ သုက်ရည်ကို ဗဂျိုင်းနား အတွင်းနက်ဆုံး နေရာမှာ စွန့်ထုတ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဖိုနဲ့မဆွဲအားသဘောအရ အလွယ်တကူ ဝင်လာစေမယ်လို့လဲ ယူဆတယ်။ AV မှာ သုက်ရည်ကို ဗဂျိုင်းနားအတွင်းနက်ဆုံးနေရာမှာ စွန့်ထုတ်တယ်ဆိုရင် ဖိုနဲ့မဆွဲအားသဘောအပြင် ကမ္ဘာဆွဲအားသဘောနဲ့ (ဂဲသြမေထရီ) သဘောတရားတွေအရ ပိုလို့တောင် လွယ်မယ်လို့ ယူဆနိုင်တယ်။ သုက်လွှတ်ချိန်မှာ RV ဖြစ်နေသူ အမျိုးသမီးရဲ့ တင်ပါးအောက်မှာခပ်နိမ့်နိမ့် အခုအခံလေးထားပါ။ ခါးကတင်ပါးရဲ့ အောက်မှာရောက်နေပါစေ။ အတူနေခြင်းအဆုံးသတ်ပြီးချိန်မှာ ပက်လက်ဆက်နေပါ။ ဆေးကြောတာကို ချက်ချင်းမလုပ်ပါနဲ့။ စိတ်ထဲမှာ သန်စွမ်းလှတဲ့ သုက်ပိုးတွေဟာ ကူးခတ်ပြီး အတွင်းထဲကို ဝင်နေကြတယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ကူးထားပေးပါ။
လိုအပ်လာရင်တော့ မျိုးပွါးအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပါ။ ဒါတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
2. အမျိုးသမီးသွေးစစ်ခြင်း၊ ရာသီရက် ၃ မှာ FSH, LH, PRL and TSH လုပ်မယ်။
3. ရာသီရင် ၈ မှာ Hysterosalpingogram, X-ray လုပ်မယ်။
4. ရာသီရက် ၁ဝ-၁၃ မှာ Vaginal ultrasound scan လုပ်မယ်။
မရသေးရင် IVF ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာမ-မျိုးဥနဲ့ ကျား-သုက်ပိုးပေါင်းစပ်စေပြီး၊ သားအိမ်ထဲထည့်ပေးနည်း လုပ်ရတော့မယ်။ ဒီနည်းကိုစပယ်ရှယ်လုပ်တဲ့ ဆေးရုံတွေက IVF လုပ်ဘို့ တခြားနိုင်ငံကနေလာရင် သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ရက် ၂ဝ ကြာနေရမယ်၊ ဆေးခန်းကို ၄-၇ ခါလာရမယ် ပြောတယ်။ (စာသပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။)
ဗီတာမင်တွေနဲ့ သွပ်ဓါတ်နဲ့ ဖေါလစ်အက်စစ် အားဆေးက သုက်ပိုးအရည်အသွေးကို အထောက်အကူ ပြုစေတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) နဲ့ ကလေးမရနိုင်တာမဆိုင်ပါ။ ကလေးမရတာ မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာ မှားပါတယ်။ စိတ်တင်းအားများနေလို့ ကလေးမရဘူးဆိုတာလည်း မမှန်ပါ။ လိင်စိတ် သန်-မှန်နေယုံနဲ့ ကလေးရစေမယ်ဆိုတာမမှန်ပါ။ လိင်စိတ် နည်းနေတာနဲ့လည်းမဆိုင်ပြန်ပါ။ စစ်တာဆေးတာတွေ အားလုံးကောင်းနေပေမဲ့လည်း ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အကြောင်း ရှိတယ်။ ကလေးမရသေးလို့ တယောက်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လုံးကို အပြစ်တင်-ထင် မနေသင့်ပါ။ တရားစာရွတ်တာဟာ တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုတာကို သက်သေမပြနိုင်ပေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်တယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။
Infertility links in my new Blog သားသမီးမရသေးသူများအတွက်စာများ
1. Blocked Fallopian Tubes သားအိမ်ပြွန်ပိတ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/blocked-fallopian-tubes.html
2. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/clomiphene-citrate.html
3. Contraception and Fertility တားဆေး-တားနည်း ဖြတ်ပြီးသည့်နောက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraception-and-fertility.html
5. Fertility and Weight ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကလေးမရနိုင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fertility-and-weight.html
6. Fertility and Weight ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကလေးမရနိုင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fertility-and-weight.html
7. Fertomid 50 mg မျိုးဥကျွေဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fertomid.html
8. Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-treatments-1.html
10. Infertility and Fallopian Tube Procedures သားအိမ်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-fallopian-tube.html
11. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
12. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/infertility-and-tb-2.html
13. Infertility Q and A ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း အမေးအဖြေများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-q-and.html
14. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-treatments-1.html
15. Infertility Treatments (2) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/infertility-and-tb-2.html
18. Pregnancy after tubal ligation သားကြောဖြတ်ပြီး ကလေးပြန်ရချင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-after-tubal-ligation.html
20. Semen collection Method သုက်ရည် ထုတ်ယူနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/semen-collection-method.html
22. Letrozole ဟော်မုန်းဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/letrozole.html
သုက်လွှတ်စောခြင်းဆိုတာ အဖြစ်များတယ်။ ဗြိတိန်မှာ ၁ဝ% မှာရှိတယ်။ မြန်မာတွေမှာလဲ သုတေသနလုပ်ထားတာ မတွေ့ဘူးသေးပေမဲ့ မေးလာသူတွေများတယ်။ တချို့က တခါတလေမြန်ပြီး တချို့ကြ အမြဲလိုမြန်နေတယ်။ အသက်ရလာသူ၊ အတွေ့အကြုံများလာသူတွေမှာ ထိန်းနိုင်စွမ်းပိုလာတာအမှန်ဖြစ်တယ်။
အချိန်ဘယ်လောက်ဆိုရင် ပုံမှန်လဲဆိုတာ တိတိကျကျအပြောရခက်တယ်။ ၇့၃ မိနစ်ကပုံမှန်ဖြစ်ပြီး၊ ၁့၈ မိနစ်ဆိုရင် မြန်တဲ့အဆင့်လို့ သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ နောက်လေ့လာမှုတခုအဆိုအရ ၂့၅% သောယောက်ျားတွေမှာ (ဗဂျိုင်းနားထဲမှာ) သုတ်လွှတ်ချိန် ၉ဝ စက္ကန့်သာကြာတယ်။
Local anesthetic gel ထုံဆေးလိမ်းပြီးဆက်ဆံပါ။ တံဆိပ်နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အထဲမှာပါမဲ့ ထုံဆေး နာမည်တွေက benzocaine or lidocaine ဖြစ်တယ်။ Long love condoms ဂျာမန်ထုတ် ကွန်ဒွမ်ကို အဆင်ပြေရင်သုံးပါ။ တချို့မှာ အမျိုးသမီးကို အနေရခက်စေတယ်။
Masters-Johnson method နည်းသုံးပါ။ သင်တန်းပေးတယ်။ လက်နဲ့ဆုပ်ထားရင် သုက်လွှတ်မှာကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့သဘောကို အခြေခံတယ်။ ကိုယ့်လက်နဲ့မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးကနေ ဆုပ်ပေးရတယ်။ ဗီဒီယိုလဲရှိတယ်။ သုက်ဟာလဲ ဆီးသွားတဲ့လမ်းကနေဘဲလာတယ်။ ကျားလိင်တံရဲ့ အောက်ဘက်ကဖြစ်တယ်။ ဆီးထွက်ပေါက်ရဲ့ အထက်နေရာကို ဖိပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ကျန်လက်ချောင်းတွေက အထက်ဖက်မှာထားရမယ်။ လက်မနဲ့ဖိပါ။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်က ဘေးတဖက်စီမှာထားပါ။ လက်ညှိုးက ကွမ်းသီးခေါင်းအရစ်နေရာ အထက်မှာ ထားပါ။ လက်ခလယ်က သူ့အောက်မှာထားပါ။ ယောက်ျားက သုက်လွှတ်ချင်ချိန်မှာ မိန်းမက အဲလိုလုပ်ပေးပါ။ လိင်တံကို ခပ်တင်းတင်းသာ ဖိကိုင်ပေးပါ။
၃။ Antidepressant drugs စိတ်မကျဆေးသုံးနည်း
SSRIs (selective serotonin re-uptake inhibitors) ဆေးကိုသုံးတယ်။ Clomipramine (Anafranil), fluoxetine (Prozac) နဲ့ sertraline (Lustral) တွေကို အသုံးများတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲသတိထားရမယ်။ ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ စိတ်တို၊ အစားပျက်၊ ပျို့၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်၊ ချွေးထွက်၊ မောပန်း။
Clomipramine ဆေးကို စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆိုရင် အစမှာ 25 mg ညမအိပ်ခင် ၁ ကြိမ်၊ လိုသေးရင် 100 mg အထိတိုးပေးတယ်။
၄။ Nasal inhalation နှာခေါင်းကနေရှူတဲ့ဆေး
၂ဝဝ၈ မှာစသုံးလာတယ်။ Clomipramine ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ သောက်ရတာထက် သက်ရောက်တာမြန်တယ်။
Tramadol ခေါ်တဲ့ အနာသက်သာဆေးကို နှာခေါင်းကနေရှူနည်းကိုလဲ သုံးတာရှိတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ သတိထားရမယ်။ ဗိုက်နာတတ်တယ်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးတတ်တယ်။ ဆေးစွဲစေနိုင်သေးတယ်။
၅။ Special constriction device ကိရိယာသုံးနည်း
ကွမ်းသီးခေါင်းအထက်နားမှာ တင်းကြပ်စေတဲ့ကွင်းတခုပတ်ထားတယ်။ တနေ့မှာ မိနစ် ၃ဝ ကြာပတ်ထားရတယ်။ ဒီနည်းမှာ လေ့လာမှုမစုံသေးပါ။
၆။ New medication ဆေးသစ်
Dapoxetine (Priligy) ဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးကလဲ စိတ်မကျဆေးဘဲ။ 30mg or 60mg သောက်ဆေးဖြစ်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ သတင်းစာမှာ ၇ဝ% တိုးတက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းမူး၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ပျို့၊ အိပ်မရ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်။
၇။ Cognitive behavior treatment (stop-start technique) အမူအယာပြုပြင်နည်း
၁။ Topical anesthetics ထုံဆေးလိမ်းဆေးများ
benzocaine, lidocaine or prilocaine ဆေးတခုခုပါတဲ့ Anesthetic creams and sprays ဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။ အတူမနေခင် ၁ဝ-၁၅ မိန်စကြိုတင် လိမ်းတာ-ဆေးဖြန်းတာ လုပ်ရတယ်။ ထုံနေလို့ ခံစားမှုနည်းနေလို့ ကောင်းလွန်းတာကို ထိန်းထားမယ်။ lidocaine-prilocaine cream ဆေးကို ဆေးလက်မှတ်နဲ့သာရောင်းတယ်။ Lidocaine sprays (Promescent, Stud 100) ဖြန်းဆေးကို အလွတ်ဝယ်လို့ရတယ်။
Oral medications စားဆေးများ
Antidepressants စိတ်မကျဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ဆေးအမျိုးအစားဆေးတွေ escitalopram (Lexapro), sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil) or fluoxetine (Prozac, Sarafem) ကိုသုံးနိုင်တယ်။ ဆေးသောက်ထားပြီး ၅-၁ဝ ရက်နေမှ သက်ရောက်မှု သိသာတယ်။ တချို့က ၂-၃ ပတ်နေမှရတယ်။ ဒီဆေးမျိုးနဲ့မရသေးသူကို tricyclic antidepressant အမျိုးအစား clomipramine (Anafranil) ဆေးပေးတယ်။ စိတ်မကျဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေကတော့ ပျိုး-အန်ချင်၊ ခွေျးထွက်များ၊ အိမ်ချင်၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း။
Tramadol (Ultram) အနာသက်သာဆေးလည်း သုံးတယ်။ ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ အိပ်ချင်တယ်။ SSRI ဆေးနဲ့ တွဲမသုံးသင့်။
Phosphodiesterase-5 inhibitors အမျိုးအစားဆေးတွေကိုလည်း ပေးတယ်။ sildenafil (Viagra, Revatio), tadalafil (Cialis, Adcirca) or vardenafil (Levitra, Staxyn) ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးသူတွေအတွက်ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Early ejaculation (1) သုတ်လွှတ်စောခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/early-ejaculation-1.html
Early ejaculation (2) သုတ်လွှတ်စောခြင်း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/early-ejaculation-2.html
Early ejaculation (3) သုတ်လွှတ်စောခြင်း (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/early-ejaculation-3.html
သုတ်လွှတ်စောတာကို ဆေးစာနဲ့ Rapid ejaculation, Rapid climax, Premature ejaculation (PE) အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တချို့က အင်္ဂါထိုးသွင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက် ၂ မိနစ်ထက် စောတာကိုမှ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅ဝ မှာ Alfred Kinsey က သုတေသနလုပ်တော့ လူ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က သူတို့အတွေ့အကြုံပေါင်း တဝက်ကျော်ကျော်မှာ အဲလိုဖြစ်တယ်။ နောက်သုတေသနတခုမှာ လူ ၇၅% က ၁ဝ မိနစ်အတွင်း သုတ်လွှတ်တယ်လို့သိရတယ်။ အမေရိးကားမယ် လူပေါင်း ၂၅-၄ဝ% မှာ အဲဒီလို ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကိုယ့်ဆက်ဆံဘက်အဖေါ်ထက် စောပြီးတာကိုခေါ်မယ်လို့ Masters and Johnson က ဆိုထားတယ်။ အဲလိုဖြစ်တာလဲ အကြိမ် ၁ဝဝ မှာ ၅ဝ ဖြစ်ပါသတဲ့။ သုတ်လွှတ်မှာကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းဟာ ယောက်ျား-မိန်းမ တဦးမဟုတ်တဦးမှာ လိင်စိတ်နဲ့ သာယာမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အရေအတွက်ရော အရည်အသွေးပါ အကြုံးဝင်တယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၅ဝ ကြား ယောက်ျားတွေမှာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲမှာ သုတ်မထွက်စေအာင် ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အချိန်ဟာ ၆ မိနစ်ခွဲလို့ အရေအတွက်ပိုင်းအရပြောတယ်။ အရည်အသွေးကိုပါ ထည့်တွက်ရမှာပါ။ သုတ်လွှတ်ချိန်က ၁ မိနစ်ခွဲသာရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က ကျေနပ်ကြသလို၊ ၃ မိနစ် သမားတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်သူတွေရှိတယ်။ ဒါမျိုးကိုသာ ဝေဒနာသည်အုပ်စုထဲ စာရင်းသွင်းပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြား ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘောကနေ လိင်စိတ်-ဆက်ဆံရေးကို အမျာကြီး သက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖေါ်နှစ်ယောက်သာကြား ဆက်သွယ်ရေး ချို့ယွင်းတာရှိနေရင်၊ ဆက်ဆံရေးကျဲနေရင်၊ ရှင်းမရသေးတဲ့ အိပ်တွင်းရေး ပြဿနာတစုံတရာ ရှိနေရင်၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှုတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကို ထိခိုက်စေမယ်။ အာရုံပိုင်းချို့ယွင်းတာ ခေါ်တယ်။
လိင်စိတ်ဖြစ်လာကြအောင် နိုးဆွတဲ့အဆင့် (၁) က သိပ်ကဲလွန်တာဆိုလဲ အဲလိုဖြစ်ပါသေးတယ်။ ၁၉၉၉ သုတေသန တခုအရ ရာသီစက်ဝန်းနဲ့ဆက်စပ်မှု တစုံတရာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လလည်ရက်တွေမှာ အချိန်အတိုဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသမီးက အသက်ပိုကြီးနေရင် ရွယ်တူအတွဲတွေထက် အချိန်ပို တိုတတ်တယ်။
သုတ်လွှတ်ဖြစ်စဉ်မှာ (၂) ပိုင်းရှိတယ်။
၁။ Emission ပဌမအဆင့်မှာ Ampullary vas deferens, Seminal vesicles နဲ့ Prostate gland သုတ် ဖြစ်ပေါ်ရာနဲ့ သုတ် ပို့ဆောင်ရာ နေရာတွေကနေ ဆီးသွားပြွန်ရဲ့ အရင်းပိုင်းကို သုတ်ရည်တွေ ရောက်လာတာ ဖြစ်တယ်။ (ဆင်ပသက်တစ်) အာရုံကြောတွေက အဆင့် (၁) ကို လုပ်ပေးတယ်။
၂။ ဒုတိယဆင့် Expulsion ဆိုတာ ဆီးအိမ် လည်ပင်းနေရာက ပိတ်လိုက်ပြီး၊ Pelvic-perineal and Bulbospongiosus muscle ကြွက်သားတွေကနေ Rhythmic contractions စည်းချက်ကျကျ ညှစ်အား ဖြစ်လာပြီး၊ Urethra ဆီးသွားပြွန် တုံခါလာမယ်။ External urethral sphincters ဆီးထွက်ပေါက်နေရာ အထိန်းက Relaxation လျော့ပေးလာမယ်။ Somatic and Autonomic motor neurons (ဆိုမက်တစ် နဲ့ မိုတာ နူရုန်း) အာရုံကြောတွေက ဒုတိယဆင့်ကို လုပ်ပေးကြတယ်။
ဦးနှောက်ထဲမှာ Nucleus paragigantocellularis နေရာက ဒီအရေးမှာ ထိန်းပေးပါတယ်။ Genetic link မျိုးရိုး လိုက်သလားဆိုတာ သံသယရှိတယ်။ လူနာတွေထဲက ၉၁% မှာ အမျိုးထဲမှာ သူ့လိုမျိုး တယောက်မက ရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။
၂ဝဝ၅ ခုမှာ အသက် ၁၉ ကနေ ၇၃ နှစ်အရွယ်၊ (ပျမ်းမှ အသက် ၄ဝ နှစ်) ရှိတဲ့ လူပေါင်း ၄၉၁ ယောက်ကို စမ်းသပ်တယ်။
သူတို့က ၄ ပါတ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ ၁ တွဲဟာ ၁ ပါတ်မှာ ဂ ကြိမ် ပျမ်းမျှ ရှိတယ်။
• ၁၄% သော ယောက်ျားတွေက ၂ဝဝ စက္ကန့်ထက်နဲတယ်။
• ၂၆% သော ယောက်ျားတွေက ၆ဝဝ စက္ကန့်၊
• ဝ့၅-၂့၅% သော ယောက်ျားတွေက ဝ့၉-၁့၃ မိနစ်။
• ၃ဝ စက္ကန့်ကနေ ၄၄ မိနစ်ကြာတယ်။ ပျမ်းမျှ ၅့၎ မိနစ်ရတယ်။ တူရကီမှာ ၃့၇ မိန်စ၊ ဗြိတိန်မှာ ၇့၆ မိနစ်။
• ပန်းအဖျားလှီးဖြတ်တာနဲ့ အဲလိုမလုပ်တာ ဘာမှ ကွာခြားတာ မတွေရ့ဘူး။
• (ကွန်ဒွမ်) သုံး-မသုံးမှာလဲ ကွာတာမရှိဘူး။
အရက်ဆိုတာက လိင်အင်္ဂါ တောင့်တင်းလာအောင် လုပ်ပေးဘို့မှာ ပြောင်းပြန်သတ္တိရှိပေမဲ့ သောက်တာမများရင် ဆက်ဆံချိန်ကို ကြာစေနိုင်တယ်။ ဆီးအိမ်တင်းနေချိန်မှာ ဆက်ဆံရင်တော့ အချိန်တိုတတ်တယ်။ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဆေး Viagra ဆေးဟာ ကျားအင်္ဂါကိုသန်မာလာစေတာ မှန်သလို ဆေးရှိန်ရှိနေတုံး ဆက်ဆံချင်စိတ်လဲ ပေါ်စေတယ်။ သုတ်လွှတ်မြန်နေသူများလဲ တခါပြီး နောက်တခါ ဆက်ဆံချင်စိတ် ပေါ်ဘို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
စုံတွဲတခုဟာ ဝါတူနေရင် ပိုကောင်းတယ်။ အပျိုစစ် နဲ့ လူပျိုစစ်။ အတွေ့အကြုံ နည်းသူချင်း၊ များသူချင်း ဆိုတာမျိုး။ ဖူးစာအရ မတူသူတွေ ဖြစ်နေလဲ နားလည်မှုပေးကြရင် ပြဿနာ မကြီးနိုင်ဘူး။ သူများတွေ ဘယ့်လောက် ကြာတယ်၊ ဘာရယ် ဘေးချိတ်ထားပါ။ (အင်တာနက်) က ပြတာတွေကိုလဲ အဟုတ် မထင်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အဖေါ်နဲ့ အတူနေတာဟာ သုတ်လွှတ် ပြိုင်ပွဲဝင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန်က အကြံပေးပါတယ် အရေအတွက်မှသည် အရည်အချင်းသို့့။
သုက်လွှတ်စောတာ ခံစားနေရသူ တကမ္ဘာမှာ ၁၆ နှစ်နဲ့ ၅၅ နှစ်ကြား ယောက်ျား အားလုံး ၄ဝ% ရှိနိုင်ပါသတဲ့။ တချို့က အင်္ဂါထိုးသွင်းမှု ဖြစ်ပြီးနောက် ၂ မိနစ်ထက် စောတာကိုမှ အဲဒါလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅ဝ မှာ သုတေသန လုပ်တော့ လူ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က သူတို့ အတွေ့အကြုံပေါင်း တဝက်ကျော်ကျော်မှာ အဲလိုဖြစ်နေပါသတဲ့။ နောက်သုတေသနတခုမှာ လူ ၇၅% က ၁ဝ မိနစ်အတွင်း သုက်လွှတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ အမေရိးကားမယ် လူပေါင်း ၂၅-၄ဝ% မှာ အဲဒီလို ဖြစ်နေကြပါတယ်။
Glans penis ခေါ်တဲ့ ခေါင်းထိပ်အဖျားပိုင်းဟာ Mucocutaneous တစ်ရှူးနဲ့လုပ်ထားတယ်။ ဖုံးပေးတဲ့အလုပ်ရော စိုစွပ်အောင် အရည်ထုတ်ပေးတာပါ လုပ်ပေးတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက အာရုံခံစားမှု သိပ်ကောင်းတယ်။ ကျားလိင်အင်္ဂါ ခေါင်းနဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ Clitoris (မ-အစိ) ဟာ သဘာဝခြင်းအတူတူဘဲ။ ၂ ခုလုံးက အာရုံခံစွမ်းအရှိဆုံးနေရာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အာရုံကြော အရေအတွက်ပေါင်း ကျားမှာ ၄ဝဝဝ၊ မမှာ ၈ဝဝဝ ရှိတယ်လို့ မျက်စိကောင်းကောင်းနဲ့ ရေတွက်ထားပါတယ်။ Corona glandis ဆိုတာက ကျားလိင်အင်္ဂါ ခေါင်းပိုင်းရဲ့ အကားဆုံးနေရာပါ။ ဒီနေရာက အာရုံခံမှု အကဲဆုံး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေရာတွေကို ထိမိအောင်လုပ်လေ မြန်မြန်ပြီးစီးလေဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သုတ်လွှတ် နှေးစေချင်ရင် အဲဒီနေရာတွေကို မထိမိအောင် လုပ်ပါလေ။
အပေါ်ဖုံးအရေပြား Foreskin ရဲ့အောက်ပိုင်း။ အလယ်တည့်တည့်မှာ လိင်တံရဲ့ ခေါင်းကိုလာ ဆက်ထားတဲ့နေရာ၊ Frenulum လို့ခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ Meissner’s corpuscles ခေါ်တဲ့ စပါယ်ရှယ် အာရုံကြောတွေ ထောင်နဲ့ချီ ရှိတယ်။ အရေပြား ဖြတ်ပေးတာ လုပ်လိုက်ရင် ဒါမျိုးတွေ အတော် ပါသွားတတ်တယ်။ Frenulum ကို ဆွပေးရင် ပြော့နေတဲ့ ကျားအင်္ဂါက သန်မာလာစေသလို သုတ်လွှတ် တာလည်း မြန်စေတယ်။ အဲဒီချက်ကောင်း ၂ နေရာကို အထိအတွေ့ နည်းအောင်သတိထားရင် သုတ်လွှတ်တာကိုနှေးစေတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့အင်္ဂါဆိုတာ အဝနေရာက အကျဉ်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊အတွင်းရောက်လေ ကျယ်လေဖြစ်တယ်။ အဝမှာ ကြွက်သားရှိလို့လဲ အကျဉ်းအကျယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ကလေးမဖွါးဘူးသူဆိုရင် အဝအောက်နုတ်ခမ်း အလည်နေရာက မိမွေးတိုင်းရှိလို့ ကျားအင်္ဂါကို ပိုပြီး ထိမိစေတာမို့ အာရုံခံစားမှု ကောင်းစေသလို အပြီးလဲ့မန်စေနိုင်တယ်။ Frenulum of the labia or Fourchette လို့ ခေါ်တဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ သမားရိုးကျဆက်ဆံပုံ အနေအထားမှာ ကျားရဲ့ Frenulum နဲ့ မရဲ့ Frenulum တို့ ထိမိနေကြတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဝ အာရုံခံစားမှု တူကြစေတယ်။ နှေးစေချင်ရင် မထိမိအောင် ဆင်ခြင်ပါ။
အတွေ့အကြုံများရင် ကြာကြာထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတာ အာရုံခံကောင်းလှတဲ့ နေရာတွေဟာ ကြာတော့ ထုံသလို ထူသလို ဖြစ်လာလို့ဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် အတွေ့အကြုံများသူများကို ဖြတ်လမ်းကလိုက်ချင်ရင် ထုံဆေးသုံးနိုင်တယ်။ နာမှန်း-ကျင်မှန်း၊ ပူမှန်း-အေးမှန်၊ ထိမှန်း-ကိုင်မှန်း၊ ကောင်းမှန်း-မကောင်းမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကျားလိင်အင်္ဂါ ထိပ်ဖျားပိုင်းကို ထုံဆေး (လိမ်းဆေး၊ ပန်းဆေး) တခုခု သုံးနိုင်တယ်။ ထိုးတာကတော့ မကောင်းလှပါ။ လိင်ဆက်ဆံလို့ နာသူများသုံးတဲ့ Xylocaine 2%, 5% (ဂျယ်လီ) ကို ဒီနေရာမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။ ၅-၁ဝ မိနစ် ကြိုတင်ပါ။ များသောအားဖြင့် မိနစ် ၃ဝ လောက်ခံတယ်။ အသန့်ထားပါ။ ပြီးရင် ဆေးပြစ်ပါ။ နောက်ဆို ဆေးသုံး စရာလိုမှာ မဟုတ်ပါ။
• သာမန်ဆိုရင် တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာစေအောင် သင်တန်းပေးမယ်၊ စိတ်အားပေးမယ်။ တခါဆက်ဆံပြီး နောက်ခါ ဆက်ဆံရင် အချိန်ပိုကြာတယ်။
• ထုံဆေး (ခရင်) လိမ်းတာလဲ တချို့အတွက် ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုံနေလို့ ခံစားမှု လျော့စေလို့ ဆက်ဆံချိန် ပိုကြာစေတယ်။
• Masters and Johnson ရဲ့နည်းတခုက Start and Stop technique ဆက်ဆံပါ၊ မပြီးခင် နားပါဆိုတာဖြစ်တယ်။
• Kegel exercises (ကီးဂယ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလဲ အကျိုးရှိတယ်။ (ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။)
• လိင်တံထဲ Vasodilator သွေးကြောကျယ်ဆေး ထိုးနည်း။ စမ်းတဲ့သူ ၇ဝ% အကျိုးရှိတယ် ဆိုပါတယ်။
• Enlast, Confido, Alpha7, Climax, Priligy, StalliOn247, Generic Ambllis နဲ့ Xytomax ဆေးတွေက (ဟာဗယ်) ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်တွေကမညွှန်ပါ။ Prexil, VigRX Plus နဲ့ PreJac တွေက ကြော်ငြာဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• (SSRI) ဆေးပေးရင် အကျိုးများတာ လာတွေ့ရတယ်။ Dapoxetine (Priligy) ဆေးက (SSRI) အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အချိန်တို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။ sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil) နဲ့ fluoxetine (Prozac, Sarafem) တွေကိုသုံးတယ်။ အဲတာနဲ့မရသူတွေကို tricyclic antidepressant ဖြစ်တဲ့ clomipramine (Anafranil) ဆေးပေးတယ်။ ဆေးတွေက အာခေါင်ခြောက်မယ်။ ပျို့ချင်မယ်။ အိပ်ချင်မယ်။ လိက်စိတ်နည်းတတ်တယ်။
• Dapoxetine Hydrochloride (Priligy) ဆေးကို ဝယ်လို့တော့ရနေပြီ။ US မှာ FDA တရားဝင်ဖြစ်လာဘို့ အဆင့် ၃ ရောက်နေပေမဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ 30 or 60 mg သောက်ရတယ်။
ပန်းသေပန်းညှိုးဆေးတွေဖြစ်တဲ့ sildenafil (Viagra, Revatio), tadalafil (Cialis, Adcirca) နဲ့ vardenafil (Levitra, Staxyn) တွေကိုလည်း စမ်းသုံးကြတယ်။
- ကနေ့ဟာ ၂၈-၄-၁၉၇၁ နေ့မှာမွေးခဲ့တဲ့ သားအကြီးဆုံး မောင်ဝဏ္ဏတင့်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
- မိသားစုထဲမှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးကနေ စစ်ဆေးတာ ပထမဆုံးခံခဲ့ရသူလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
- မောင်ဝဏ္ဏတင့်ဆွေ ၁၂-၁၁-၂ဝဝ၁ နေ့က နယူးဒေလီမြို့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
- သူကွယ်လွန်တော့ အရိုးပြာကို ဂင်္ဂါမြင်ထဲမှာမျှောခဲ့ပါတယ်။
Dec 13, 2014 1:25am
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က (၃၁) ထဲမှာပါ။ ပထမကလေးက အသက် (၂၉) နှစ်မှာ တစ်ယောက်မွေးထားပါတယ်။ ကလေး (၃) နှစ်လောက်မှာ နောက်တစ်ယောက် ယူဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာ မိခင်အသက်အရွယ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ကလေးဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးတို့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိပါလဲရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အမြန်ဆုံးဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။
Dec 13, 2014 11:50am
မိခင်အသက်က ကလေးဥာဏ်ရည်ကို မသက်ရောက်ပါ။ ဖခင်အသက်ငယ်လွန်းရင်သာ တချို့မှာ သက်ရောက်ပါတယ်။
Apr 28th, 4:59am
Apr 28th, 11:11am
ဟာ ၄ လနေမှ ဖတ်ဖြစ်တာလား။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်မအသက်က ၄၅နှစ်ပါ။ အရင်ကိုယ်ဝန် ၂ခါပျက်ဖူးပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၉နှစ်ပါဆရာ။ အခုမှ တတိယအကြိမ်ကိုယ်ဝန်ပြန်ရပါတယ်။ ၄ပတ်ကျော်နေပါပြီ။ ကျွန်မတို့က ကလေး အရမ်းလိုချင်တော့ OG ပြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ခိုင်အောင် သောက်ဆေး တလပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်က ဒီအရွယ်မွေးရင် ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ကလေးပဲ ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လုံး တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်မှီတဲ့ကလေးမျိုး မွေးအောင် ဘာတွေလုပ်ရလဲဆရာ။ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲဆိုတာ ကျေးဇူးကြီးစွာဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော်။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
၂။ ကျွန်မအသက်က (၃၁) ထဲမှာပါ။ ပထမကလေးက အသက် (၂၉) နှစ်မှာ မွေးထားပါတယ်။ ကလေး (၃) နှစ်လောက်မှာ နောက်တစ်ယောက် ယူဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာ မိခင်အသက်အရွယ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ကလေး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတို့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိပါလဲရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အမြန်ဆုံး ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။
၃။ ကျမ အသက်က အခု ၄၃ နစ်ပါ။ ခက်တာက လက်ထပ်မဲ့သူက ခုအသက် ၅ဝ ရှိပါပြီ။ သူကသူ့မှာ မျိုးဆက် မရှိတဲ့အတွက် ကျမနဲ့ ကလေးတယောက် ယူချင်ပါတယ်။ ကျမလဲ အသက်က ၄ဝ ကျော်နေပြီဖြစ်လို့ စိတ်မှာ မယူချင်ဘူး။ ကျမ ကြောက်တာက မပြည့်မဲ့ကလေးတွေ မွေးမှာကို ကြောက်တယ်။ နစ်ယောက်လုံးလဲ အသက်ကြီးနေကြပြီ။ တကယ် ကလေး ယူဖြစ်ရင်လဲ ကျမအသက် ၄၄ ကျော်မှ မွေးနိင်မယ်လေ။ အဲဒါ ဖြစ်နိင်-မဖြစ်နိင် ဆရာဆီမှာ မေးကြည့်တာပါ။ ကျမက တနစ်တခါ ကျန်းမာရေးစစ်တဲ့အတွက် သွေးတိုး၊ ဆီချို၊ နှလုံး ဘာရောဂါမှ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ယူဖြစ်ရင်လဲ ဘာတွေ ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိင်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
သိပ်အစိုးရိမ်မကြီးပါနဲ့။ ဉာဏ်ရည်မမှီ ကလေးက မိဘတွေ အသက်အရွယ် ကြီးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ သတိထားတာတော့ ကောင်းပါတယ်။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းနေတဲ့ကလေး မွေးလာတာကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မျိုးဗီဇ ကို လွှဲချနိုင်ပါတယ်။ ရှာလို့ရတဲ့ အကြောင်းခံတွေ ထဲမှာ သန္ခေစရှိခါစမှာ ပဋိဇီဝဆေးသုံးတာ၊ ဥပမာ Sulfonamide နဲ့ Nitrofurantoin ဆေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် တချို့ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့တာ၊ ဥပမာ Iodine, Vitamin A, Vitamin A B 2, Vitamin C, Vitamin E နည်းတာ၊ ဓါတ်ဆီ အဆိပ်သင့်တာ၊ Fusarium mycotoxin zearalenone အဆိပ်သင့်တာတွေပါတယ်။ သတိပြုဘို့ ကောင်းတာက ဒီအထဲမှာ မိဘအသက်ကြီးလို့ကြောင့်ဆိုတာ မပါတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတောင် ၆ဝ% လောက်က ဘာလို့ဖြစ်လဲ မသိရပါ။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ထင်မှတ်လက်ခံတဲ့ ကံတရားအရ ဖြစ်တာပေါ့။
ခုခေတ်မှာ အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေရော ကြီးသူတွေပါ ကိုယ်ဝန်ရသူ တိုးလားနေတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နဲ့ ဝေးလ်စ်မှာ စစ်တော့ အသက် ၃ဝ ကျော် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၄၈% ရှိတယ်။ ၁၉၈၆ တုံးက ၂၈% သာ ရှိရာကနေ တိုးလာတာပါ။ အသက် ၃၅-၃၉ အုပ်စုကလဲ တိုးလာတယ်။ ၄ဝ ကျော်က အနှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ ၁့၁% ကနေ ၃့၅% ဖြစ်လာလို့ ၂ ဆတိုးလာတယ်။
အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့တော့ မပြောပါ။ ၃ဝ ကျော်တာနဲ့ ကလေးရနိုင်တဲ့ အခွင့် အလမ်းကစ နည်းလာတယ်။ ၃၅ နဲ့ ၃၉ ကြား အမျိုးသမီးတွေမှာ ၂ဝ% အခွင့်အလမ်းမရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အရင်ကတော့ အသက်ကြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုတာ ကလေးတွေ အများကြီး မွေးထားပြီးတဲ့သူကို ပြောကြပေမဲ့ အခုခေတ်မှာ အသက်သာ နဲနဲကြီးပေမဲ့ ကလေးမွေးမများ သေးသူတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အမှန်က ကလေးများများ မွေးသူတွေသာ အခက်အခဲတွေ ပိုကြုံလေ့ရှိတာပါ။ ခေတ်အမျိုးသမီးများဟာ ဗဟုသုတရော အာဟာရပါ ပိုပြည့်ဝကြံ့ခိုင်နေတာ များလာတယ်။
အရွယ်ရလာသူတွေဟာ သူ့တို့ ကိုယ်ခန္ခာကို ပိုသိကြတယ်။ ဖြစ်လာမှာကို ခံနိုင်ရည် ပိုရှိကြတယ်။ ပိုလွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ အမှိခို နည်းတတ်ကြတယ်။ အသက် ပိုရလာလို့ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုစတာတွေ မရှိဘို့သာ အရေးကြီးတာပါ။ တခုကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးလာမဲ့ ကလေးဟာ ချို့ယွင်းတာမျိုးက ငယ်သူတွေထက်တော့ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ စောစောက သုတေသနကဘဲ ပြောတယ်၊ ၃၅-၃၉ အတွင်း ၅ဝဝ မှာ ၁ ယောက် အဲလိုဖြစ်ရင်၊ ၄ဝ-၄၅ အတွင်းတွေက ၂၅ဝ မှာ ၁ ယောက် ဖြစ်တယ်။ ၄၅ ကျော်ရင် ၇ဝ မှာ ၁ ယောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Maternal serum screening နဲ့ တခြား စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်သင့်ကြတယ်။ Chorionic villus sampling ဒါမှမဟုတ် Amniocentesis စမ်းနည်းတွေ ပြောတာပါ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလို စစ်လို့ ကြိုသိရရင် ကိုယ်ဝန်ကို ရပ်ပြစ်နိုင်တယ်။
အသက် ၄ဝ ကျော်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ကလေးအသေမွေးနှုံး များတတ်တယ်။ ၂ဝ-၃၉ အတွင်းမှာ လူ ၁ဝဝဝ ထဲက ၅-၆ ယောက်၊ ၄ဝ ကျော်ရင် ၉ ယောက်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို တခြား ကိုယ်ဝန်တွေထက် မမွေးမီ စောင့်ရှောက်ခြင်း ပိုလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက လွဲရင် ကလေးတွေ အားလုံး ကျန်းမာကြပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေကို မွေးတဲ့အခါမှာလည်း ပိုဂရုစိုက်စရာ လိုကြပါတယ်။ ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေကို မွေးစေအောင် ကူညီလုပ်ပေးခြင်း၊ ခါးထုံဆေးနဲ့ မွေးပေးခြင်း၊ Oxytocin ညှစ်အားကောင်းဆေးသွင်း မွေးခြင်း၊ ညှပ်ဆွဲ မွေးပေးခြင်း၊ ဗိုက်ခွဲမွေးပေးခြင်းတွေ ပြောတာပါ။ အမှန်က ဆရာဝန်တွေက Risk မယူခြင်ကြတာလည်း ပါနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မိခင်လောင်းရော ဆရာဝန်-ဆရာမတွေပါ Stress မများဘဲ၊ သိပ်အစိုးရိမ်လည်း မကြီးသင့်ကြဘူး။
အသက်ကြီးမိခင်တွေကနေ မွေးတဲ့ကလေးမှာ Autism ဆိုတဲ့မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ရှိတ်တာ များပြီ၊ အသက်ကြီး ဖခင်ရဲ့ဇနီးဟာ အသက် ၃ဝ ထက်ငယ်နေရင် မွေးလဲတဲ့ကလေးတွေမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိတာ တခြားစုံတွဲတွေထက် ပိုတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကပြောနေပါတယ်။ သူများတွေထက်ပိုတယ်ဆိုတာ အဲဘဲမလွဲမသွေမွေးမယ်လို့ဆိုတာ မဟုတ်ပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ၁၉၉ဝ တုံးက Autism ရောဂါရှိနေတဲ့ ကလေးပေါင်း ၁၂၁၅၉ ယောက်ကို လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မွေးလူနာပေါင်း ၅ သန်းထဲကတွေ့ရှိရတာပါ။ ဒိအရင်လေ့လာမှုအရ ဖခင်က အသက်ကြီးလေလေ အဖြစ်များလေလေ။ အခုတွေ့ရှိချက်အရ ဖအေက အသက် ၄ဝ ကျော်၊ မအေက အသက် ၃ဝ ကျော်တွေမှာ ငယ်ရွယ်သူဖခင်တွေထက် ၅၉% ပိုတာတွေ့ရတယ်။ မိခင်က ၃ဝ ကျော်၊ သူ့ယောက်ျားက ၄ဝ ကျော်ဆိုရင် ၁၃% သာပိုတယ်။ မိခင်အသက် ၅ နှစ်ပိုကြီးလေလေ ဖြစ်နိုင်ချေ ၁၈% တိုးတယ်။ အသက် ၄ဝ ရှိမခင်တွေဟာ ၂ဝ ကျော်တွေထက် ၂ ဆ ပိုတယ်။ ၃၅ နှစ်အောက်တွေထက် ၇၇% ပိုတယ်။ တခုသိထားရတာက စမ်းသပ်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အဲဒီကာလမှာ အသက် ၄ဝ ရောက်ပြီးမှ ကလေးမွေးလာကြတာ ပိုများလာတာမို့ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို ကာလတိုင်းအတွက် အတည်ယူလို့မသင့်ဘူး။
ဒီမွေးရာပါရောဂါက မိခင်အသက်မရွေးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လေ့လာမှု ၂ ခုကိုယှဉ်လိုက်ရင် ဖအေ့အသက်ကြီးတာက မအေအသက်ကြီးတာထက် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အစ္စရေးလ်မှာလုပ်တဲ့ လေ့လာချက်မှာတော့ အသက် ၃ဝ အောက် ဖခင်တွေထက် အသက် ၄ဝ ကျော် ဖခင်တွေကနေ ၅ ဆ ပိုဖြစ်စေတာ တွေ့ရတယ်။ မိခင်တွေကို ပိုပြီးထောက်မပြကြဘို့ သတိပေးချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတခုအရ အမေရိကားမှာ ကလေးမွေးလာတဲ့ မိခင်တွေရဲ့ အသက်ဟာ အရင် အနှစ် ၂ဝ ကနဲ့စာရင် အသက်ပိုကြီးတာတွေ့ရတယ်။ ၁၉၉ဝ တုံးကဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက် မိခင်တွေက ၁၃%၊ အသက် ၃၅ ကျော်တွေ့ ၉% သာရှိခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၈ ရောက်တော့ ဆယ်ကျော်သက်မိခင်တွေက ၁ဝ%သာရှိပြီး ၃၅ နှစ်ကျော် မိခင်တွေက ၁၄% ရှိလာတယ်။ အရင်ကဆိုရင် ကလေးလာမွေးပေမဲ့ လက်မထပ်သူက ၃၁% ရှိခဲ့ရာကနေ နောက်မှာ ၂၈% သာရှိလာတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသား တိုနီရန်းဒဲလ်ရဲ့ ပထမဆုံးကလေးကို သူ့အသက် ၇၇ နှစ်မှာရတယ်။ လယ်ရီကင်း ခေါ် CNN နာမည်ကြီး ပင်တိုင်ထုတ်လွှင့်သူဟာ သူ့ရဲ့ သတ္တမမြောက်ဇနီးနဲ့ ကလေးမွေးတော့ သူ့အသက်က ၆၆ နှစ် ရှိပြီ။ နာမည်ကြီးရှေ့နေ အဲလိဇဗက် အက်ဒ်ဝပ်ဟာ အသက် ၅ဝ မှာ ကလေးမွေးတယ်။
Young father ယောက်ျားက အသက်ငယ်နေရင် ဉာဏ်ရည်မမှီတဲ့ ကလေး မွေးတတ်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/young-father.html
၁။ ရီလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရာအားလုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကို တခဏတော့ ကျွန်တော် ရောက်သွားတယ်ဆရာ။ ဆရာရော ဘယ်လိုခံစားမိပါသလည်းဆရာ။
၂။ ဒါမှဆရာ့့ တခါတလေ သရော်စာ တင်ပါဆရာရဲ့။
• ကျွန်တော် ရီစရာရေးတာက သူများအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ။ စာသင်ပေးရင်း မပြင်းရအောင်။ မှတ်မိအောင်။ တခြားအရာတွေနဲ့ ခေါင်းပူနေချိန်မှာ ပေါ့ပါးသွားအောင် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
• Sense of humor ဟာသဉာဏ်နဲ့ Satire သရော်စာမတူတဲ့အကြောင်းလေး တခါရေးဘူးတယ်။ Satire သရော်တာမှာ Criticism ဝေဖန်ကန့်ကွက်တာပါတယ်။ ရှုံ့ချတာပါတယ်။
• ကျွန်တော် စာရေးတာမှာ တခါတခါဟာသလေးနှောတာကို သရော်စာလဲမမြောက်ဘူးလို့ အပြောခံရဘူးတယ်။ ကျွန်တော်က သူများကို သရော်တာမျိုးကို သိပ်မကြိုက်ပါ။ စစ်အုပ်စုကိုတောင်မှ ခပ်ထေ့ထေ့သာရေးတယ်။ ရေးပြီးရင် အားနာနေတတ်သေးတယ်။
• သူများကို သရော်လို့၊ ရီစရာပြောလို့ ဘာအကျိုးရမလည်းကြည့်သင့်တယ်။
• ရီစရာပြောကြတာမှာ အနှောင့်အသွားလွတ်တာမျိုးဆို ပိုကောင်းတယ်။ လူအများကြားအောင်၊ ဖတ်နိုင်အောင်ပြောတာ၊ ရေးတာမျိုးဆိုရင် ချက်အောက်မရောက်တာမျိုးကသာ သင့်မြတ်တယ်။
• စိတ်ဝေဒနာသယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ထိထိမိမိဖြစ်တဲ့ဟာသ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ငါကမှ နပိုလီယန်အစစ် ဆိုတဲ့ ဟာသကို ပြောဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ စိတ်ဝေဒနာသည်တွေကို နှိမ်သလိုပြောတာ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆလာပါတယ်။ တခြားရောဂါသည်တွေနဲ့ ဆိုင်တာတွေလဲ အတူတူဘဲ။
• ပညာဥာဏ်နည်းသူတွေက မှားလုပ်၊ လွဲပြောတာကို ရီစရာလုပ်တာမျိုးလဲ မသင့်ဘူး။ မြန်မာစကား အနည်းအပါးသာ တတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသူဆရာမလေးတယောက် ဆေးခန်းရောက်ကာစမှာ (စီနီယာ) တွေကို ဆီးစစ်တာသင်ပေးခိုင်းတယ်။ ခဏနေမှ ဆီးထဲမှာအနည်ပါတာကို Urine for Albumin လို့ ဗိုလ်လိုလဲ ကျွန်တော်က သင်ပေးတယ်။ ပြီးမှ သေချာအောင် ပြန်မေးပါတယ်။ အေ့း့ အခုစစ်တာဘာလဲ။ သူဖြေတာက သေးတဲ့။
• နောက်ဆရာမအသစ်တွေ ရောက်ပြန်ရင် အဲဒီနမူနာလေးပြောပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်ဆရာမနာမည်ကို ထည့်မပြောပါ။
ကျွန်မအသက် ၃၃ နှစ်ပါ။့့ မှာနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၆ နှစ်ပါ။ အခုမှ ကိုယ်ဝန်စယူတာပါ။ ၂၆ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းဆီးကို စစ်ကြည့်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်းကထင်းပြီး တစ်ကြောင်းက မှိန်နေပါတယ်။ မြင်တော့မြင်ရပါတယ်။ မသေချာလို့ ဆေးရုံမှာဆီးထပ်စစ်တာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ မေလ ၁၈ နဲ့ ၂ဝ ကြားကို အိုဂျီအပ်ခိုင်းပါတယ်။ အပျော်လွန်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှစ်ရက် ဘယ်နှစ်လဆိုတာမမေးခဲ့မိလို့ ကျွန်မကိုယ်ဝန်မှာ ဘယ်နှစ်ရက် ဘယ်နှစ်လ ဆိုတာလေး သိချင်လို့ပြောပြပေးပါ ဆရာရှင့်။ ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်လပိုင်းလောက်မှ ဗိုက်စပြီး ပူပါသလဲဆရာ။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေ ဘယ်နှစ်လပိုင်းလောက်မှာ စပြီးခံစားရပါသလဲ ဆရာရှင့်။ အခုရက်ပိုင်းတွင်တော့ ရင်သား နဲနဲနာကျင်တာနဲ့ အဖြူနဲနဲဆင်းတာရယ်။ ဝမ်းချုပ်တာရယ်အဲဒါမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတော့ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။ အဲဒါလေးသိချင်လို့ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာရှင့်။
(ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း)။ ကိုယ်ဝန်ကို ရာသီနောက်ဆုံးလာစဉ်က သွေးစဆင်းတဲ့ ပထမရက်နေတွက်ရတယ်။ အဲဒီရင်ထဲကို ၉ လ နဲ့ ၇ ရက်ပေါင်းရင် ခန့်မှန်းချေ မွေးမယ့်ရက်ရမယ်။ ဘယ်နှစ်ပါတ်ဆိုတာနဲ့တွက်တယ်။ ၄ ပါတ်ကို တလလို့သတ်မှတ်တယ်။ ခံစားရတာတွေက မတူကြပါ။ တချို့ ၄ လအထိ အတော်ခံစားရတယ်။ ဗိုက်ပူတာက ၁၂ ပတ် (၃ လ) နောက်မှစတယ်။
၁။ (ရာသီပီး)၊ (တစ်ကြောင်းကထင်းပီး)၊ (အပျော်လွန်ပီး)၊ (ပီးတော့)၊ (ဗိုက်စပီးပူပါသလဲ)၊ (စပီးခံစားရပါသလဲ) တွေမှာ (ပြီး) လို့သာ ရေးရပါတယ်။
(ပီ) ပြီးရင် (ပု) သာလာတယ်။ (ပီး) ဆိုတာမရှိပါ။
၂။ (ဆီးထက်စစ်တာ) လို့မရေပဲ (ဆီးထပ်စစ်တာ) လို့ရေးရပါတယ်။
(ထက်) ဆိုတာ ထက်ကြပ်မကွာ၊ ထက်ခြမ်းခွဲ၊ ထက်မြက်၊ ထက်ဝက်၊ ထက်ဝန်းကျင်၊ ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ၊ ထက်သန်မှာ သုံးရတယ်။
(ထပ်) ဆိုတာကို ထပ်ကျော့၊ ထပ်ဆင့်၊ ထပ်တလဲလဲ၊ ထပ်တူထပ်မျှ၊ ထပ်တွန့်၊ ထပ်မံတွေမှာ သုံးရတယ်။
၃။ အိုဂျီအက်ခိုင်းပါတယ်လို့မဟုတ်ပဲ (အိုဂျီအပ်ခိုင်း) လို့ရေးရပါတယ်။
(အတ်) ကို အတ္တနောမတိ၊ အတ္တဟိတ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေမှာ သုံးရတယ်။
(အပ်) ကို လုပ်အပ်၊ ရင်ချင်းအပ်၊ အပ်ချုပ်၊ အပ်ကျမပ်ကျ၊ အပ်ချည်လုံး၊ အပ်စပ်၊ အပ်နှံတွေမှာသုံးရတယ်။
အမှန်တော့ ဆရာပြောသလို plaque အကြောင်းမပါလို့မရပါဘူး။ သွားတိုက်နည်းစနစ်မှားပြီး သွားခြေမှာ ကျောက်တွေ များလာတာကြောင့် ရေစီးကမ်းပြို သွားဖုံးရောင်ရောဂါဖြစ်ရတာ အများဆုံးပါ။ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲတခုမှာပေါ့့ သွားဆရာဝန်တွေကို သွားအကြောင်းမေးလိုက်တဲ့ exammner က ရာထူးဝန်ရုံးက သွားနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဘာမှမသိတဲ့သူက မေးသတဲ့။ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမေးတော့ သွားဆရာဝန်က plaque အကြောင်းသေချာပြောပြတာပေါ့။ ဒါကိုပဲ ဆရာသမားက မင်းဘာတွေဖြေနေတာလဲကွာတဲ့့ ငါလိုချင်တာတခုပဲဖြေဆိုတော့မှ vit c ချို့တဲ့လို့လို့ ပြောလိုက်တော့မှ သူရေးမှတ်လာတဲ့ စာအုပ်ကြီးကြည့်ပြီး ကျေနပ်သွားလေရဲ့။
ကျွန်တော် သွားရာဝန်မဟုတ်ပါ။ ရာထူးဝန်ဆိုတာတော့ ဆရာဝန်အလုပ်ရအောင် သွားဖြေရဘူးတယ်။ မုံရွာနဲ့ မန္တလေးကြားဘူတာရုံတွေ ရွတ်ပြရတယ်။ နောက်ဆုံးဘုရင်ခံ နာမည်မေးတယ်။ Sir Hubert Rance (ဆာ ဟူးဘတ် ရန့်စ်) ကို ငါးပိသံနဲ့သာဖြေတတ်ခဲ့တယ်။
• (ဖလိုရိုက်) ကို ဓါတ်ပါတဲ့၊ ထည့်ထားတဲ့ရေကနေရတယ်။ သောက်ရေထဲမှာ (ဖလိုရိုက်) ဓါတ် ပါနေရတယ်။ နည်းရင် Fluorine 1 mg/liter လောက်ထည့်ပေးရတယ်။
• (ဖလိုရင်း) နည်းရောဂါဟာ အစားအသောက်ထဲမှာ (ဖလိုရိုက်) ဓါတ်နည်းလို့ဖြစ်တယ်။ သွားပိုးစားမယ်။ Osteoporosis အရိုးအားနည်းမယ်။
• အားနည်းနေရင် သွားပေါက်တာမလှဘူး။ သွားအရောင်မဖြူဘူး။ အရိုးကျိုးလွယ်မယ်။
• Fluoride ကို သွားတိုက်ဆေး ပါးစပ်ဆေးရည်ထဲမှာလည်းပါတယ်။ ပင်လယ်စာတွေထဲမှာပါတယ်။ ငါး၊ စပျစ်သီး၊ လဖက်ရည်ထဲမှာလဲပါတယ်။
• မွေးကာစကလေးမှာ တနေ့ကို 0.01 mg လိုအပ်တယ်။ ၉-၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ2mg လိုတယ်။ လူကြီးယောက်ျား4mg နဲ့ လူကြီးမိန်းမ3mg လိုတယ်။
• သွားတိုက်ဆေး၊ ပါးစပ်ဆေးရည်တွေထဲမှာ (ဖလိုရိုက်) များနေရာကနေဖြစ်စေတယ်။
• သောက်ရေထဲမှာ (ဖလိုရိုက်) များနေတာလဲ အကြောင်းခံတခုဖြစ်တယ်။
• သွား-သွားဖုံးတွေ အရုပ်ဆိုးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့ရောဂါကို ခေါ်တယ်။ အသက် ၈ နှစ်အတွင်းမှာ (ဖလိုရိုက်) ဆားဓါတ် များလွန်းလို့ဖြစ်တာပါ။ ဒီအရွယ်မှာ ကြီးသွားတွေပေါက်လာပြီ။ ဖြစ်ကာစမှာ သွားအရောင် မဖြူတာနဲ့စတယ်။
• ဒီရောဂါအဖြစ်မနည်းပါ။ အသက် ၆ နှစ်ကနေ ၄၉ နှစ်အတွင်း၊ လူ ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်တယ်။ ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်မှာ အများဆုံး။ ၁% ကဆိုးတယ်။ ၂% က အသင့်အတင့်ဆိုးတယ်။ ကျန်တာတွေက မဆိုးပါ။
• ဆေးကုစရာမလိုတာကများပါတယ်။ သွားအထူးကုဆရာဝန်ကနေ Tooth whitening သွားတွေကို ဖြူအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Bonding နည်း၊ Crowns နည်းနဲ့ Veneers နည်းတွေလဲရှိတယ်။
ကွန်မင့် = ဝရောမမဏိကဘာကိုပြောတာပါလဲဆရာ
- ဖုန်းပေါက်စလေးမှာ စာရေးရတာ ခက်ကြမှာပဲ။ ဝေရာမဏိကိုရိုက်တာ မှားနေတယ်။ ဝေရာမဏိကိုမေးချင်တာဖြစ်မယ်။
- အရင်တခါတင်တုံးကလည်း (ဝေရာမဏိ) ကို တယောက်ကမေးတယ်။ အခုလည်းစောင့်နေတာ။
- ဧကန္တတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်။ သီလပေးတာ လိုက်မဆိုဖူးတဲ့သူတွေက သိမှာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ရေးတာတွေကို ဘယ်ဘာသာဝင်မှဖတ်ပါဆိုတာမရှိပါ။
- (မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ) = လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏၊
- (ဝိရမဏ + ဏီ) = ကြဉ်ရှောင်ခြင်း။
- မလုပ်ပဲနေတာ၊ မပြုပဲနေတာ၊ ရှောင်ကြဉ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
abstain from = refrain from, avoid, decline, give up, stop, refuse, cease, do without, shun, renounce, eschew, leave off, keep from, forgo, withhold from, forbear, desist from, deny yourself, kick (informal)
E.g. Abstain from sex
ကနေ့ ကျွန်တော်အသက်ကြီးလှပြီဆိုတာထောက်ပြသူ ၂ ယောက်တွေ့တယ်။
၁။ ဆရာရယ် ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ စာကလဲအရှည်ကြီးရှင်းပြထားတာ လေးစားရိုသေစွာ ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာ့အသက်နဲ့မမျှအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကို လေးစားရိုသေတာခင်ဗျ။
နှစ်ဦးလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်မင့် (၁) မှာ အသက်အရွယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်လား၊ လူနာလား။ ရောဂါဆိုကိုပြောရင် ဆရာဝန့်အသက်ကို မကြည့်ပါ။ လူနာ့အသက်သာကြည့်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး သမားဆိုအိုမှဆိုကြ မဟုတ်လား။
ကွန်မင့် (၂) ထဲမှာ ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာပါတယ်။ တနေ့ကပဲ ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာလေး ရေးလိုက်သေးတယ်။
ဇီဝိတဒါန၊ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွေ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ သာရေးနာရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကို အကျိုးဆောင်လို့ သုံးရတာမျိုး မကြိုက်ချင်ပါ။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ အများကနားလည်ကြတယ်။ ကုသိုလ်ဖြစ်တွေက အကျိုးပေးမှာမှန်ပေမယ့် အကျိုးမမျှာ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ အကြောင်းဆောင်သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
Service provider (ဆာဗစ် ပရိုဗိုက်ဒါ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘာသာပြန်ရင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ (အင်ဂျီအို) တွေ ပေါ်လာမှ သုံးလာတာပါ။
သူများတိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေကိုပါ (ဆာဗစ် ပရိုဗိုက်ဒါ) လို့ သုံးကြတယ်။ ကျွန်တော်က သိပ်မကြိုက်ပါ။ စာတွေဖတ်ရင်တော့ အဲလိုရေးပေမယ့် လက်တွေ့ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ (ကျမ သူနာပြုဘယ်သူပါ)၊ (ကျွန်တော် ဒေါက်ဘာဘယ်ဝါ) လို့သာ လူနာတိုင်းကို အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ကြတယ်။ (အိုင် အင်မ် ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်ဒါ) လို့ ပြောတာ ခုထိ တယောက်မှမတွေ့သေးဘူး။
မီဒီယာအရေးအသားတွေထဲမှာ တချို့ဟာတွေက တလွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ထွင်လုံးကိုဦးစားပေးနေကြတယ်။ တန်းကနည်းသိချင်သူက ဘာလဲဟလုပ်နေရတယ်။
ဆရာ (အက်စ်ပါတိန်း) ဆိုတာ ဆေးသကြားလားရှင့်။
ဆေးသကြားဆိုတာ ဘာလည်းလို့ ပြန်မေးရပါမယ်။ တရပ်မှာ နာမည်တမျိုးခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အရပ်မှာ ဆေးသကြားဆိုတာ (ဂလူးကို့စ်) ကိုခေါ်တယ်။ အဲတာက ရေနဲ့ဖျော်သောက်ရတာနဲ့ ဆေးထိုး၊ ဆေးသွင်းရတာမျိုး။ ဆီးချိုရှိလို့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်ဖျော်ရင် သကြားအစားထည့်ရတာကို သကြားဆီလို့ခေါ်တယ်။ အချဉ်လုပ်တဲ့အခါ သုံးတာမျိုး။ အဲတာက Saccharin (ဆက်ခရင်) ဖြစ်တယ်။
Sugar (သကြား) ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်ဖျော်တာသုံးတယ်။ Glucose (ဂလူးကို့စ်) မောလို့ရေနဲ့ဖျော်သောက်တာ။ Dextrose (ဒက်စထို့စ်) သွေးကြေထဲသွင်းတာ။ Sucrose (ဆူးခရို့စ်)၊ Fructose (ဖရပ်တို့စ်) အချိုရည်တွေမှာပါတာ၊ Lactose (လက်တို့စ်) နို့အမျိုးမျိုးထဲမှာပါတာတွေကိုတော့ အတော်များများသိကြပါတယ်။
(သကြား) ဆိုတာလည်း အများကြီးကွဲသေးတယ်။ လူတိုင်းနေ့တိုင်းသုံးတဲ့သကြားကို White or Regular sugar လို့ ခေါ်တယ်။
1. Bakers Special Sugar
3. Brown sugar (light and dark)
4. Coarse sugar
5. Confectioners or powdered sugar
8. Free-flowing brown sugars
9. Fruit Sugar
11. Liquid Sugar
12. Muscovado or Barbados sugar
13. Sanding sugar
14. Superfine, ultrafine, or bar sugar
Artificial Sweeteners and Sugar Substitutes သကြားအစားသုံးတာတွေက ၁ဝ မျိုးမကရှိတယ်။
8. Stevia leaf extract
နာမည်ကြီး (ပက်ဆီ) ထဲမှာ အချိုဓါတ် (အက်စ်ပါတိန်း) သုံးတော့မည်မဟုတ်
• ကနေ့ထွက်တဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်းပါ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သောက်သုံးသူအများဆုံး (ပက်ဆီ) ထဲမှာ အချိုတုဓါတ် (အက်စ်ပါတိန်း) ကိုမသုံးတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ အဲဒီဓါတ်မပါတာကိုသာ လာမယ့် သြဂုတ်လကစပြီး ရောင်းချပါတော့မယ်။
• အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးထိန်ချုပ်သူတွေကတော့ (အက်စ်ပါတိန်း) ဓါတ်ဟာ ဖျောာာ်ရည်တွေထဲထည့်သုံးတာ စိတ်ချရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• PepsiCo ကုမ္ပဏီအဆိုက ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ စီးပွါးရေသက်သက်ပါလို့ပြောပါတယ်။
• ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Diet Pepsi ရောင်းရတာ ၅% နည်းသွားတယ်။ Aspartame ပါတဲ့ Diet Coke ရောင်းရတာ ၆% မကနည်းသွားတယ်။
• PepsiCo ကုမ္ပဏီက (အက်စ်ပါတိန်း) အစား Sucralose နဲ့ Acesulfame potassium (Ace-K) ရောတာကို သုံးပါတော့မယ်။
• (အက်စ်ပါတိန်း) ပါတာဟာ ပါးစပ်မှာ ခံစားမှုတမျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ တတ်သိနားလည်သူတွေကဆိုပါတယ်။
• (အက်စ်ပါတိန်း) ဓါတ်ကိုသားသုံးရာမှာ သုံးနိုင်တယ်လို့ ၁၉၈ဝ ကျော်ကတည်းက အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
• (အက်စ်ပါတိန်း) ဟာ အလေးချိန်တူရင် သကြားထက် အဆ ၂ဝဝ ပိုချိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်လိုရီမများလှဘူး။
• ကနေ့ အစားအသောက်မျိုးစုံမှာ အချိုတုမျိုးစုံသုံးထားပါတယ်။
• ၂ဝဝ၅ သုတေသနတခုအဆိုအရ (အက်စ်ပါတိန်း) ကနေ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလားမေးခွန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
• အများဆုံးလက်ခံထားတာက စိတ်ချရပါတယ်။ တနေ့ကို အဲလို သကြားမပါအချိုရည် ၁၄ ဗူးသောက်ရင်တော့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်က အသက်၂၅ ပါ။ ဇနီးက လဲ ၂၅ ပါ။ ကျွန်နော်တို့ ကလေးမယူချင်သေးလို့ပါ။ ထိုးဆေးနဲ့ စားဆေးတွေက ဝမှာစိုးလို့ မသုံးချင်ပါဘူးဆရာ။ ဒါကြောင့် spermicide သောက်လို့ရပါသလားဆရာ။ ဘယ်လိုသောက်ရတာလဲဆရာ။ မြန်မာပြည်မှာရော အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရပါသလား။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
• သုက်ပိုးသတ်ဆေးဆိုတာ သောက်ဆေးမဟုတ်ပါ။
•Spermicidal foam အမြှုပ်၊ Jelly (ဂျယ်လီ)၊ Cream (ခရင်မ်)။ Suppositories ဗဂျိုင်းနားထဲထည့်ဆေးပြား နဲ့ Film (ဖလင်) သုတ်ဆေးတွေ ရှိတယ်။
• အတူမနေခင်မှာ (ဗဂျိုင်းနား) ထဲထည့်-လိမ်း-သုတ်ထားရတယ်။
• တချို့အမျိုးအစားကို မတိုင်ခင် ၃ဝ မိနစ်ကြိုတင်သုံးရတယ်။ တချို့က အဲလောက်စောင့်ဘို့မလိုဘူး။
• အက်စစ်ဓါတ်ပါလို့ ပူစပ်စပ်နေမယ်။ မလောင်စေပါ။
• ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေထဲမှာပါတဲ့ Cervical Cap သားအိမ်ဝအပိတ်နဲ့ Diaphragm သားအိမ်ဝအဖုံးတွေကို Spermicide သုက်ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ပါ ရောသုံးသင့်တယ်။
• Spermicidal Condoms ဆိုတာက ကွန်ဒွမ်မှာသုက်ပိုးသတ်ဆေးပါပြီးသားဖြစ်တယ်။
• Nonoxynol-9 ဓါတုဆေးသုံးထားတယ်။
Spermicide Brands တံဆပ်အမျိုးမျိုးလာတယ်။
- Delfen Foam
- First-Progesterone VGS
- Gynol II
- Today Sponge
- VCF-Vaginal Contraceptive Film
- Vagi-Gard Douche Non-Staining
(၁) ကိုယ်ဝန်တားနည်းများရဲ့ ထိရောက်မှု အများဆုံးနည်းတွေ
• အရေပြားအောက် ဆေးချောင်း၊ သားအိမ်ထဲထည့်ပစ္စည်း၊ သားကြောဖြတ်ခြင်းများ၊ = 99%
• ထိုးဆေး၊ = 97%
• စားဆေး၊ (ဗဂျိုင်းနား) ကွင်း၊ = 92-95%
• (ကွန်ဒွမ်)၊ သားအိမ်ဝအဖုံး-အပိတ်၊ ဆေးမြှုပ်၊ = 84-89%
• ဝေရာမဏိ = ၁ဝဝ%
(၂) ထိရောက်မှု အနည်းဆုံးနည်းတွေ
• အကာအကွယ် လုံးဝမသုံးခြင်း = 85%
• သုက်ပိုးသတ်ဆေး တမျိုးတည်း = 29%
• နေ့ကောင်းရက်သာ ရွေးနည်း = 25%
• အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်) = 21%
• သုက်ရည် အပြင်စွန့်ထုတ်နည်း = 18%
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်ဆေးကို ဘယ်မှာဝယ်ရသလည်း၊ ဘယ်လောက်ပေးရသလည်း မသိပါ။ ဆောရီး။
ဆရာရှင့် Tendinitis ဆိုတာဘာရောဂါပါလဲရှင့်။ သမီးခလေးမွေးပြီး တစ်လအကျော်မှာ ကလေးနို့တိုက်ရင်း ကလေးန့အတူအိပ်ရင်း လက်က ကလေးဖက်ထားတာ နိုးလာတော့နဲနဲဆီနာပါတယ်။ နောက်နေ့ကျ မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာထရင် လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်စလုံးက ကျင်နေပါတယ်။ အဲနောက်ပိုင်းည ဘက်လက်မကနေ လက်ကောက်ဝတ်ထိ နာနေပါတယ်။ လက်မထောင်လို့မရပါ။ ကျန်တဲ့လက်ချောင်းတွေ လူပ်ရင်ရပါတယ်။ လက်မနဲ့လက်ကောက်ဝတ်အရိုးပဲ နာတာပါ။ လက်မထောင်လို့မရပါ။ ဒီ့့ က ဆေးခန်းပြတော့ ဒဏ်ကျေဆေးနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက် သောက်ဆေးပေးပြီး လက်အပတ်ကို ပတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ အရိုးကိုဓါတ်မှန်ရိုက်ပါတယ်။ ဘာပြသနာမှမတွေ့ပါ။ ပြီးတလပြန်ချိန်းပါတယ်။ ဒီမှာက ဆရာဝန်န့်တွေ့ဖို့ တလကြာစောင့်ရပါတယ်။ ဒီနေ့တလပြည့်နေမှာ လက်ကိုကြည့်ပြီး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ရောဂါနာမည်ကို tendinits လို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ သမီးအဲရောဂါအကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ပြီးတော့ သမီးမှာ အရင်ကလေးဘက်နာပိုးလဲရှိပါတယ်။ အရင် လေးရာကနေ ဗမာဆေးသောက်ပြီး နှစ်ရာဖြစ်သွားပါတယ်။
တန်ဒွန်ဆိုတာ ကြွက်သားအဆုံးနေရာက အရွတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ အဲတာရောင်တာကို Tendinitis ခေါ်တယ်။ အနားသက်သာဆေးနဲ့ ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေကို အလွယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
သမီးကိုဒီဆေးလိမ်းခိုင်းပြီး ပုံပါဆေးသောက်ခိုင်းပါတယ်။ လက်ကိုလဲခုလိုအပတ်ပတ်ထားခိုင်းပြီး နားခိုင်းပါတယ်။
အရွတ်ကြောရောင်ခြင်းဆိုတာ အဆစ်၊ ကြွက်သား၊ အရိုး၊ အရိုးနု၊ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ အမယ်ပေါင်း ၁ဝဝ လောက်ထဲက တခုဖြစ်တယ်။ (တင်ဒွန်) ဆိုတာ ကြွက်သားကနေ အရိုးကိုလာဆက်နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ သူ့မှာအဖုံးလွှာလေးရှိတယ်။ ကာကွယ်မှုပိုအောင်ချောဆီလည်းပါတယ်။ အဖုံးလွှာရောင်တာကို အရွတ်ကြောရောင်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ နာမယ်။ တင်းနေမယ်။ ရောင်နေမယ်။
သူ့ကိုလိုတာထက်အသုံးပြုမိလို့နဲ့ ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ အားကစားသမားတွေမှာ ခဏခဏဖြစ်ကြတယ်။ လူရွယ် လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ ဖြစ်ရင်လည်း ရုတ်တရက်ဖြစ်တယ်။ ကြာနေတတ်တယ်။ နောက်ပျောက်ပါတယ်။ ပြန်လည်းပေါ်တတ်တယ်။
- Rest နားပါ။ ဖြစ်တဲ့အရွတ်ကိုအသုံးပြုတာကိုနားထားရမယ်။
- Activity modification လုပ်နေတာကို လိုရင်ပြင်ပါ။ ဥပမာ အပြေးသမားဆိုရင် အကာအကွယ်သုံးပြေးပါ။ လျှော့ပြေးပါ။
- Splints အခုအခံသုံးပါ။
- Cold and heat အပူ-အအေးကပ်ပေးပါ။
- Medication ဆေးသောက်ပါ။ Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) စတီရွိုက်မပါတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ Steroids အဲတာနဲ့မရသေးသူကို (စတီရွိုက်) ဆေးပေးမယ်။ တချို့ကို ထိုးပေးတယ်။
- Physical therapy ရုပ်ပိုင်းကုသမှုလိုတတ်တယ်။
- Surgery ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုတတ်တယ်။
Painkiller writings အနာသက်သာဆေးစာများ
1. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer_25.html
2. Narcotic Analgesics မူးယစ်ဆေးပါ အနာသက်သောဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/narcotic-analgesics.html
3. Narcotic Pain Medications ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေး အပြင်းစားများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/narcotic-pain-medications.html
4. NSAID အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သတိပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/nsaid.html
5. NSAIDs (1) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/nsaids-1.html
6. NSAIDs (2) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို လေ့လာခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/nsaids-2.html
7. Painkillers (1) အနာသက်သာဆေးများ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/painkillers-1.html
8. Painkillers (2) အနာသက်သာဆေးများ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/painkillers-2.html
9. Paracetamol combo drugs (ပါရာစီတမော) ပူးတွဲဆေး သတိပေးချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paracetamol-combo-drugs.html
ဆရာ့ကိုလေးစားစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ မေးစရာလေးရှိလို့ပါဆရာ။ သမီးအသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့ ယနေ့အထိ အလာဂျီတွေ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ ညဘက်ဆိုပိုထွက်ပါတယ်ဆရာ။ လမ်းထဲက ဆရာဝန်ကိုပြကြည့်တော့ Calamine lotion ပဲလ်ိမ်းဖို့ပေးပါတယ်။ လိမ်းပြီးသက်သာပေမယ့် မနက်နဲ့ ညပိုင်းတွေမှာ ပြန်ထွက်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးက marvelon 28 လည်း သောက်ပါတယ်။ ယနေ့ထိ အိမ်ထောင်သက် ၁ နှစ်နဲ့ ၇ လလုံး သောက်လာတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ဆေး ကို ၃ ရက်လောက် မသောက်ဘဲနေကြည့်တော့ အလာဂျီတွေမထွက်တော့ဘူးဆရာ။ ပြန်သောက်တော့ ပြန်ထွက်ပါတယ်။ အလာဂျီအတွက် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာနှင့် marvelon28 ကြောင့်ဆိုရင်လည်း သမီးတို့ကလေးယူဖို့ အစီစဉ်မရှိသေးတာကြောင့် ဘယ်ဆေးနဲ့ သင့်တော်မလဲဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးပါအုံးဆရာ။
Marvelon (မာဗယ်လွန်) တားဆေးကို (အလားဂျစ်) ဖြစ်သူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူ၊ အသဲရောဂါရှိနေသူ၊ မျက်စိ သွေးကြောရောဂါရှိသူ၊ နှလုံး (အတက်) ရဘူးသူ၊ အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဥပမာ ရင်သားကင်ဆာရှိသူ၊ သွေးကြောပိတ်ရောဂါရှိသူ၊ အသဲကင်ဆာ၊ နှလုံး-ဦးနှောက် သွေးကြောပိတ်ဘူးသူ၊ မိုင်ဂရင်းရောဂါရှိသူ၊ သရက်ရွက်ရောင်နေသူ၊ အသဲရောင် အသားဝါရှိနေသူ၊ မွေးလမ်းကနေသွေးဆင်းတာ အကြောင်းရှာမရသူတွေ ဒီဆေးမသောက်သင့်ပါ။
Birth Control Methods ကိုယ်ဝန် တားနည်း-တားဆေး ဘယ်လိုရွေးမလဲ (၁၈) ပုဒ်ရေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတာ လက်လှမ်းမီာတွေ့ရင် ခေါင်းစဉ်ပြောပါ။ စာပို့ပေးပါမယ်။
၁။ Pills ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးများ
၂။ Depo ထိုးဆေး
၃။ IUD သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်နည်း
၄။ Implant ကိုယ်ဝန်တား အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ ဆေးချောင်း
၅။ Patch ကိုယ်ဝန်တား ဆေးကပ်ခွါ
၆။ Male Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်)
၇။ Female Condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်)
၈။ Vaginal Ring (ဗဂျိုင်းနား) ထဲထည့်ရတဲ့ ကွင်း
၉။ Cervical Cap သားအိမ်ဝ အပိတ်
၁ဝ။ Diaphragm သားအိမ်ဝ အဖုံး
၁၁။ Sponge သုက်ပိုးသတ် ဆေးမြှုပ်
၁၂။ Spermicide သုက်ပိုးသတ်ဆေး
၁၃။ Fertility Awareness နေ့ကောင်းရက်သာရွေးနည်း
၁၄။ Vasectomy ယောက်ျား သားကြောဖြတ်ခြင်း
၁၅။ Tubal Ligation အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်ခြင်း
၁၆။ Combination injection နောက်ပေါ်ထိုးဆေးနည်း
၁၇။ Over 35 အသက်မငယ်သူများအတွက် ရွေးချယ်နည်း
၁၈။ How to decide ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ
(အင်ဒီယာနာ) ပြည်နယ်၊ (ဖို့ဒ်ဝိန်း) မြို့က ဇေတဝန်ကျောင်း
- အခုပဲ (ဖို့ဒ်ဝိန်း) မြို့ကပြန်ရောက်တယ်။ သားအငယ်ဆုံးမိသားစုနဲ့အတူသွားကြတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်က သူနဲ့ပဲ တခေါက်ရောက်ဖူးတယ်။
- အဲဒီတုံးက ရာဇာတင့်ဆွေက Ball State University မှာ ကျောင်းတက်နေတုံး။ အခု ကလေး ၂ ယောက်ရှိနေပြီ။
- ဆရာမောင်စိုးချိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်ဇင်ဇင်တို့ကလည်း လက်ဆောင်တွေပေးလိုက်သေးတယ်။
- နေ့လည်စာကို (ဘူဖေး) ဆိုင်မှာ ကိုခင်မောင်လေးကကျွေးတယ်။
- အခုပဲ (ဖို့ဒ်ဝိန်း) မြို့ကပြန်ရောက်တယ်။
- ဇေတဝန်ကျောင်း ဆရာတော်ဆီလည်းရောက်တယ်။ ကျွန်တော့် ဖေ့စ်ဘွတ်ဆရာတော်ပါ။
- ရောဂါဘယတွေလည်း မေးလို့ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ဆက်လက်ပြီး အကျိုးဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုပေးပါတယ်။
- အခုပဲ (ဖို့ဒ်ဝိန်း) မြို့ကပြန်ရောက်တယ်။ သားအငယ်ဆုံးမိသားစုနဲ့အတူသွားကြတာပါ။
- လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်က တခေါက်ရောက်တုံးက တညတာတည်းခိုခဲ့တဲ့ ကိုခင်မောင်လေးအိမ်မှာပဲ စတည်းချတယ်။ အဲဒီတုံးကတော့ သူကအိမ်ထောင်မကျသေး၊ အခုကလေး ၂ ယောက်ရှိပြီ။
- အသိမိတ်ဆွေတချို့နဲ့လည်းတွေ့တယ်။ NLD ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ရံပုံငွေအတွက် မြန်မာပြည်က အဆိုတော်တွေလာမယ့်ကိစ္စလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။
- လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်က တခေါက် ရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီတုံးက တညတာတည်းခိုခဲ့တဲ့ ကိုခင်မောင်လေးအိမ်မှာပဲ စတည်းချတယ်။ လက်ဆောင်လည်း ပေးလိုက်သေးတယ်။ ကင်ပွန်းရွက်။
- အရွက်ခူးခဲ့တဲ့အပင်နဲ့ အမှတ်တရပုံလဲရိုက်ခဲ့တယ်။ အပင်ပေါက်လည်းပေးလိုက်သေးတယ်။
HIV-AIDS ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ
• မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း (W&P Line) (ဖွင့်ချိန် - နံနက် ၁ဝးဝဝ နာရီမှ ညနေ ဝ၅းဝဝ နာရီ အတွင်း) ဖုန်း - ကျား - ဝ၉ ၇၃၂၁ ၂၂၂၆၊ မ - ဝ၉ ၇၃၂၁ ၂၂၂၇
• မင်္ဂလာဒုံ အထူးကုဆေးရုံကြီး - ကျိုက္ကလို့မှတ်တိုင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဆိုင်ရှေ့၊ ပြည်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့။ ဖုန်း- ၆၃၅ ၂၉၉
• ဝေဘာဂီဆေးရုံ - မေဓာဝီလမ်းမကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၉ဝ၁၇ဝ၊ ၆၉ဝ၁၁၈
• ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီး - မေဒါဝီလမ်းမအဆုံး (၆ ကွေ့မှတ်တိုင်) ဝေဘာဂီမြို့သစ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်။ ဖုန်း- ၆၉ဝ ၁၁၉၊ ၆၉ဝ ၁၇၄
• ရတနာ့မေတ္တာ - အမှတ် ၄ဝ၆၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၇၃ဝ၂၄၇၉၃၊ ၇၃ဝ၂၄၇၉၄
• ရတနာ့မေတ္တာ - ၄ဝ၆ ဆေးခန်း၊ အမှတ် (၄ဝ၆)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ရေအရင်းအမြစ်ရုံးနှင့် ညောင်တန်းအိမ်ယာကြား။
• AMI (Aide Medicale International) - အမှတ် ၁၁၆၆၊ ဒလတွံတေးလမ်းမကြီး၊ ဒလမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၂၆၉၅၅၆
• World Vision - အမှတ် ၁၆၁၁၊ ပုဂံလမ်း၊ ၅၇ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၉၁၃၆၃၊ ၇၂၄၅၅၅
• OASIS - အမှတ် ၆ဝ၁၊ ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်အနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၁၃၅၇၉၊၅၃၇၉၅၇၊ ၇၂၁ဝ၇၆ လိုင်းခွဲ ၄ဝ၅
• MDM (Medecins Du Monde) - အမှတ် ၁၆(က)၊ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ ချော်တွင်းကုန်းနှင့် (၁ဝ၆) မှတ်တိုင်းကြား၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၆၂၆ဝ၄၊၆၅၂၆၅၈
• MBCA - အခန်း (၂၁)၊ တိုက် (၁)၊ မီးရထားရပ်ကွက်၊ လမ်းရှည်လမ်းနှင့် တက်လမ်းထောင့်၊ စံတော်ရပ်ကွက်၊ ပြည်။ ဖုန်း - စီ/အို ဝ၅၃-၂၄၇၅၉
• MNMA - ရွှေဟင်္သာ၊ အရှေ့ပေါက်လမ်း၊ မဟာရုံဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့၊ ပြည် (၁)။ ဖုန်း - ဝ၅၃-၂၇၂၈၄
• MNMA - အမှတ် (၁ဝ၃)၊ (၂) ရပ်ကွက် မြေတိုင်း (၈)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပဲခူး။ ဖုန်း - ဝ၅၂-၃ဝ၅၂၃
• MNMA - အမှတ် (၃ဝ၉)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုယာပင်ရပ်ကွက်၊ ရွာဘေးမြို့နယ်၊ ပြည် (၂)။ ဖုန်း - ဝ၅၃-၂၇ဝ၈၅
• MPG (Myanmar Positive Group) - အမှတ် ၁၈၊ စံရိပ်ငြိမ် ၆ လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၂၇ဝ၄၇၊ ၅၂၄၁ဝဝ
• Central STD Team - ရန်ကုန် အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ တိုးချဲ့ဆောင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၃၇၇၉၄၅၊၃၇ဝ၅၆၈
• AFXB (Association Francois-Xavier Bagnoud) - အမှတ် ၆ (က)၊ ယိုးဒယားလမ်းသွယ်၊ ၉မိုင်၊ မ၇မ်းကုန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၆ဝ၆၇၃၊၇၂၅၈၁၄
• AFXB - အမှတ် ဗ၊ ယိုးဒယားလမ်း (၉)မိုင် မှတ်တိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၆၆ဝ ၆၇၃
• Alliance - MCC (ခိုနားရာ)၊ အမှတ် ၅၉၂၊ နွယ်နီ ၈ လမ်း၊ ငရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဖုန်း - C/O ၇ဝ၆၂၁၂
• Alliance - အမှတ် (၇)ဗ (၆)၊ ရန်ကင်း၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၅၄ဝ ၅၄၂၊ ၅၅၈ ဝ၉ဝ
• PSI - QC ဆေးခန်း၊ အမှတ် ၁၊ ထီးတန်း (၄)လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ဖုန်း- ၇၂ဝ ၃၉၃
• PSI (Population Services International)/Top Center - အမှတ် ၁၂၄၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၆၂၉၂၇၊ ၇၂၅၈၁၄
• PSI (Population Services International)QC Center
- အမှတ် ၄၂၊မြေညီထပ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ထီးတန်း ၄ လမ်းထောင့်၊
စက်မြေကွင်းရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၇၂ဝ၃၉၃၊ ၅ဝ၈၄၄၇
• AZG - ၅၇-၅၈၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ မြခွာညို၊ (၈)ဂိတ်မှတ်တိုင်အနီး၊
• AZG/MSF-Holland (သဇင်ဆေးခန်း) - ၁၁ ကွေ့ဈေးအနီး၊ တောင်ငူလမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ဖုန်း - ဝ၉၅၁ဝ၅၇၂၁
• AZG/MSF-Holland (သဇင်ဆေးခန်း) - စနေမမှတ်တိုင်၊ဖားအံလမ်း၊ ရသတရုံးအနီး၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ဖုန်း - ဝ၉၅၁၇၉၈၅၃
• AZG/MSF-Holland (သဇင်ဆေးခန်း) - အမှတ် (၅ဝ၃)၊ ဘူတာရုံလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၄၁ဝ၂၅
• AZG/MSF-Holland (သဇင်ဆေးခန်း) - ၈ ဂိတ်မှတ်တိုင်၊ မြခွာညိုအိမ်ယာရှေ့၊ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၄၇ဝ၆၅
• MSI (Marie Stopes International) - အမှတ် ၄ဝ၃၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကန်ကြီး၊ မကြီးရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ဝ၉၈၆၁ဝ၁၄၇
• MSI (Marie Stopes International) - အမှတ် ၅၂၊ မြို့မလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ဝ၉၈၆၁ဝ၁၄၇
• MSI (Marie Stopes International) - အမှတ် ၂၄၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မ မြောက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။ ဖုန်း- ဝ၅၆-၂၁၂၇ဝ
• MSI (Marie Stopes International) - အမှတ်၂၇ဝ၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၃၃။ (၁ဝ)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ ဖုန်း - C/O ၆၁ဝ၉၅၇
• MSI (Marie Stopes International) - အမှတ် (၃၇)၊ ဇမ္ဗူသီရီအနောက်(၂)လမ်း၊ (၇)ဈေးကွ့အနီး၊ (၆)ရပ်ကွက် (အနောက်ရပ်ကွက်)၊ သာကေတမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၅၃၂၉၅၊C/O ၇၂၆၇၃၄
• STD Team - သာကေတကျန်းမာရေးရုံး၊သာကေတမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၅၃၂၉၅၊ C/O ၇၂၆၇၃
• STD Team တောင်ဥက္ကလာဆေးရုံးကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၆၅၉၈ဝ
• STD Team သန်လျင်ဆေးရုံးကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်။ ဖုန်း-ဝ၅၆-၂၁၅၁၁
• STD Team အင်းစိန်ဆေးရုံး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၄၁ဝ၃၂
• STD Team မြို့နယ်ကျန်းမာရေးရုံး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၉၉၃၆၅၊၆၉၉၁၈၁
• STD Team ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ တိုးချဲ့ဆောင်၊ လသာမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၃၈၂၁ဝ၈
• STD Team ကြည့်မြင်တိုင်ဆေးရုံး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၃၅၈၈ဝ
အသည်းရောင်ပိုးတွေ ကိုယ်ခန္ဓာအပြင်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နေနိုင်သလည်းဆိုတာထက် ဘယ်လောက်ကြာအထိ ကူးစက်နိုင်သလည်းက အရေးကြီးတယ်။ ရက်အတော်ရှာရှင်ကြတယ်။ စိုတဲ့ဝန်ကျင်မှာ ပိုရှင်ကြတယ်။ ခြောက်နေတာမှာ သိပ်မကြာပါ။
Hepatitis A Virus (HAV) အသည်းရောင် (အေ) = အတော်ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။
Hepatitis B Virus (HBV) အသည်းရောင် (ဘီ) = ၇ ရက်တပါတ်။
Hepatitis C Virus (HCV) အသည်းရောင် (စီ) = ၄ ရက်အထိ။ တချို့လေ့လာမှုအရ အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာ ၁၆ နာရီအထိ။
Hepatitis D Virus အသည်းရောင် (ဒီ) = (ဘီ) ပိုးပါမှသာ ကူးစက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
Hepatitis E Virus အသည်းရောင် (အီး) = (အေ) နဲ့တူတယ်။
နိုင်ငံရေးသမိုင်းနောက်ခံတွေ ဖြည့်စွတ်ပြီး အထ္တုတ်ပတ္တိကောင်း တအုပ်တော့ ပြုစုပေးထားပါဆရာ။ နောက်လူတွေအတွက် အကျိုးရှိအောင်။
• မကြာသေးခင်ကလည်း မီဒီယာကမိတ်ဆွေတဦးက NCGUB အကြောင်းရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ စင်ပြိုင်အစိုးရ မဖွဲ့ခင်ကအကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်က ဝန်ကြီးချုပ်ထက်ပိုသိတယ်။ ဖွဲ့ပြီးချိန်ကနေ ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိကိုတော့ ဒုတိယမဟုတ်ရင် တတိယအသိဆုံးလူလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
• ခုထိသဘောထားပြောရရင် ကိုယ်ရေးအကြောင်းကို စာတတန်ပေတဖွဲ့ မရေးချင်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝ တဝက်က နိုင်ငံရေး။ ၁၉၈၈ ကနေ အခုထိဆိုတော့ နှစ်အစိတ်ကျော်ပြီ။
• နိုင်ငံရေးထဲမှာ လိုသူရှိတယ်။ မလိုသူရှိတယ်။ ရန်လုပ်သူရှိတယ်။ သတ်ပြစ်ချင်သူရှိတယ်။ စစ်အစိုးရကနေ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ ထောင်ချ၊ လိုအပ်ရင်ထောင်ထဲမှာသတ်ပြစ်တာ မဆန်းပါ။ ဆန်းမှာက အခေါ်အဝေါ်ကတော့ လုပ်ဖေါ်ကိုက်ဖက်တွေ၊ လက်တွဲလုပ်နေသူတွေကနေ အဲလိုလုပ်ကြတာပါ။
• အကျဉ်းသဘော နည်းနည်းရေးတာကိုတော့ ဂျာနယ် ၂ ခုက ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဘူးတယ်။ အဲတာကလည်း အမှတ်မထင် ရေးမိတာလို့ အခုပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်။
• ပြည်တွင်းမှာလုပ်ခဲ့တာတွေထဲမှာ ထုတ်မပြောချင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဘို့ လှို့ဝှက် လုပ်ခဲ့ကိုင်ခဲ့တာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို ကူညီခဲ့သူတွေပါတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်ရေးမှာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ လက်သုံးစကားက လူသာဆွေးတယ် အမှုကမဆွေးဘူးတဲ့။ စစ်အုပ်စုဟာ ယုံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အလွန်မှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်ချက်ဖြစ်တယ်။
• ပြည်ပမှာလုပ်ရတာတွေထဲမှာ ထုတ်မရေးချင်တာတွေက များတယ်။ နိုင်ငံရေးရော လူမှုရေးမှာပါ ကိုယ်ကတော့ မှန်တယ်လို့ယူဆပေမယ့် တခြားသူက မှားတယ်လို့မှတ်ယူတတ်တယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ကြတယ်။ မကြိုက်ရင် ဆန့်ကျင်မဲပေးမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြုတ်ချကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖြုတ်ချတာခံရဘူးတယ်။ လုပ်တဲ့သူတွေက နည်းလမ်းတကျ မဟုတ်ပေမယ့် ဖြုတ်ချတယ်လို့ ကြေညာခံရပါတယ်။
• အဲလိုဟာတွေကို ပြန်ရေးရတာက့့ ခြောက်ရေနှူးသလိုဖြစ်တယ်။ တချို့အချက်အလက်တွေ ထည့်ရေးပြန်ရင် အနာရှိသူတွေအပေါ် တုတ်ကျသလိုနေမယ်။ တခုရေးရင် တချက်ကျမှာမျိုး။ အကျိုးရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
• စာရေးတာ ဘာအတွက်လည်း။ ကိုယ်ရည်သွေးစရာမရှိပါ။ နောက်ကြောင်းတွေရေးတာကို သမိုင်းလို့ပြောကြတယ်။ အဆုံးအမကောင်းတခုက မအအောင်လို့ သမိုင်းသင်ရတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ရေးတာတွေကတော့ သမိုင်းရယ်လို့ တန်းမဝင်ပါ။ ဖတ်တဲ့သူတွေ အလိမ်မခံရအောင်ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါတယ်။ စစ်အစိုးရလုပ်ထားတဲ့ အမည်မည်းစာရင်း ထဲကတော့ ထွက်ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ရေးရင် လိမ်တဲ့သူတွေကတော့ ရန်သူစာရင်းကနေ ဖျက်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
• ဆေးပညာစာတွေမှာ Myth and Facts အထင်မှားနဲ့ အရှိတရားကို ခွဲခြားရေးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ Facts and Fiction အချက်အလက်မှန်နဲ့ ကြံစီမှုကိုခွဲရေးပါတယ်။